Medical Writings: June 2010
လူ့ ခန္ဓာကိုယ်အား ရေ၊ (အမိုင်နိုအက်စစ်)၊ (ဖက်တီးအက်စစ်)၊ (နူးကလီးရစ်အက်စစ်)၊ သကြား၊ (ဖိုင်ဗာ)များ ဖြစ်သည့် (ကာဗွန်ဟိုက်ဒရိတ်) စသည်တို့ဖြင့် တည်ဆောက်ထားသည်။ ယင်းဓါတ်ပေါင်းများသည် (ကာဗွန်)၊ (ဟိုဒရိုဂျင်)၊ (အောက်စီဂျင်)၊ (နိုက်ထရိုဂျင်)၊ (ဖေါ့စ်ဖါးရပ်စ်)၊ သံဓါတ်၊ သွပ်ဓါတ် စသောဓါတ်များပါဝင်သည်။ ၄င်းတို့အား စုပေါင်းလျက် (ဟော်မုန်း)၊ (ဗီတာမင်)စသည်တို့ ဖြစ်လာသည်။ စားလိုက်သည့် အစားအစာများအား အစာခြေစနစ်မှနေ၍ အစာကို သွေးထဲ ရောက်အောင် စုပ်ယူနိုင်သည်အထိ အဆင့်ဆင့် ခြေပေးရသည်။
အာဟာရဓါတ် ၆ မျိုး
1. Carbohydrates (ကာဗွန်ဟိုက်ဒရိတ်)
2. Proteins ပရိုတင်း၊
3. Fats အဆီ၊ 4. Vitamins ဗီတာမင်များ၊
5. Minerals ဓါတ်ဆားများ၊
6. Fiber (ဖိုင်ဗာ)နှင့် ရေ။
Carbohydrates (ကာဗွန်ဟိုက်ဒရိတ်)၊ Proteins ပရိုတင်း နှင့် Fats အဆီတို့က Energy ခွန်အားကိုရရှိသည်။ Calorie (ကလိုရီ) နှင့်တိုင်းတာသည်။ (ကာဗွန်ဟိုက်ဒရိတ်)၊ ၁ ဂရမ် မှ ၄ ကလိုရီ၊ ပရိုတင်း ၁ ဂရမ် မှ ၄ ကလိုရီ၊ နှင့် အဆီ ၁ ဂရမ် မှ ၉ ကလိုရီတို့ အသီးသီးရရှိသည်။ (ကာဗွန်ဟိုက်ဒရိတ်)ဆိုသည်မှာ နေ့စဉ်မစားမနေ စားကြရသည့် ဆန်၊ ဂျုံ၊ ပြောင်း၊ လူး-ဆပ်တို့မှာပါဝင်သည်။
Protein အသားဓါတ်ဟုလူသိများသော ပရိုတင်းတွင် မရှိမဖြစ်သော Essential Amino Acid (အမိုင်နို-အက်စစ်)များ ပါဝင်သည်။ လူ၏ပျက်စီးသွားသော (တစ်ရှူး)များ၊ (ဆဲလ်)များ အစားထိုးရန်၊ အသစ်တည်ဆောက်ရန်အတွက် အသုံးကျသည်။ အသား၊ ပဲ၊ ငါး၊ ဥ၊ အစေ့အဆံ၊ နို့၊ နို့ထွက် ပစ္စည်းများကရရှိသည်။ ကိုယ်အလေးချိန် ၇ဝ ကီလို ရှိသူအတွက် တနေ့လျင် ပရိုတင်း ၇ဝ ဂရမ်လိုအပ်သည်။ (ဖိုင်ဗာ) ဆိုသည်မှာ အသီးအနှံများတွင် ပါဝင်သည်။ ၄င်းကိုမစားက ဝမ်းချုပ်စေသည်။
လူ့ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန်၏ အလေးချိန် ၇ဝ% သည် ရေဖြစ်သည်။ တနေ့လျင် ရေ ၁-၉ လီတာ လိုအပ်သည်။ ရေနည်းပါက dehydration ရေခမ်းခြောက်ခြင်း အခြေအနေ ဖြစ်လာမည်။ လိုအပ်သော ဓါတ်ဆားများမှာ Calcium, Chloride, Magnesium, Phosphorus, Potassium, Sodium, Sulfur, Copper, Chromium, Manganese, Molybdenum, Nickel, Selenium, Vanadium, Cobalt, Iodine, Iron တို့ဖြစ်ကြသည်။
မျှတသော အစားအစာ Balanced Diet
အမျိုးအစား စုံလင်အောင် စားရသည်။ သင်တင့် မျှတစွာ ပါဝင်ရမည်။ အာဟာရ လိုအပ်ချက်နှင့်လည်း ပြည့်မီရမည်။ လိုအပ်ချက် အနည်းအများရှိသည်။ အလုပ်ကြမ်း လုပ်ရသူ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များက ပို၍စားရမည်။ သန့်ရှင်းရေးနှင့် ကိုယ်လက် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ခြင်းအားဖြင့် လူသည် ကျန်းမာ သန်စွမ်းစေသည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် သံဓါတ်၊ ဖေါလစ်-အက်စစ်၊ ဗီတာမင် ဘီ ၁၂၊ ဗီတာမင်ဘီအုပ်စု၊ ကယ်လ်စီယန် ဓါတ်ဆားများ ပေးရမသည်။ အရက်ကြောင့် အသဲရောင်ခြင်း Alcoholic Hepatitis ဖြစ်လာလျင် (Vitamin supplement + 40 kcal/kg + 1.5-2 G/kg as protein + Folic acid + B 1) တို့ပေးရသည်။ အာဟာရနှင့် ဆေးကုခြင်းမျိုးဖြစ်သည်။
Cholesterol (ကိုလက်စတီရော) ဆိုသည်မှာ အစားအစာထဲတွင် ပါဝင်သော အဆီတမျိုးဖြစ်သည်။ လိုအပ်သော်လည်း များပါက သွေးကြောလေးများ၏နံရံတွင် လာစုသောကြောင့် သွေးကြောကျဉ်းရောဂါ ဝင်လာသည်။ တိရစ္ဆာန်အဆီ-အရွတ် များ၌ (ကိုလက်စတီရော) ပါဝင်သည်။ (မာဂျရင်း)၊ (ကွတ်ကီးစ်)၊ (ခရက်ကား)တို့မှာလည်း များသည်။ အဆီနည်းသော ဆီများမှာ corn, canola, olive, safflower, soybean and sunflower တို့ဖြစ်ကြသည်။ ကျန်းမာရေးနဲ့ မသင့်သော ဆီများအား Trans fats or trans fatty acids ဟုခေါ်သည်။ ဝါစေ့ဆီ၊ ပဲပုတ်စေ့ဆီများကို ဟိုက်ဒရိုဂျင် ထပ်ပေါင်းထည့် လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အသုံးခံ၊ အစားအသောက်ကလည်း အရသာထူးလာစေသည်။ အဆိုး(LDL) နှင့် အကောင်း(HDL) နှစ်မျိုးရှိသည်။ အဆိုးများလျင် နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း (စထုပ်ခ်)၊ ဆီးချို အမျိုးအစား ၂ ရနိုင်သည်။ အဝလွန်၊ အသဲ၊ ကင်ဆာ၊ အဇာမိုင်ယားရောဂါများလည်း ဖြစ်စေသည်။ ပြောင်းရန်မလိုဘဲ နွားနို့၊ အမဲ-ဆိတ်-သိုးအဆီ၊ ထောပတ်၊ မာဂျရင်းများတွင် (ထရန့်ဆီ) ပါနေပြီးဖြစ်သည်။
Junk food ဆိုသည်မှာ အလွယ် ဝယ်ယူစားသောက်နေကြသော ခေတ်ပေါ်အစာများကို ခေါ်သည်။ အာဟာရတန်ဘိုး နည်းနည်း သာပါဝင်ပြီး။ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်စေနိုင်သော ဆား၊ (ထရန့်ဆီ)၊ ကလိုရီများသည်။
အစားအစာများကို အအေးခံခြင်း၊ ရေခဲသေတ္တာထဲထားခြင်းနည်းများဖြင့် သိုလှောင်ထားရာ၌လည်း သတိထားရမည်။ ယင်-ကြွက်-ကြောင်-ပိုးဟပ်စသည်များ မလာစေရန် လုံခြုံအောင် ဖုံးထာရန်လည်း သတိထားရမည်။ ချက်ပြုတ်ရာတွင် လည်း အပူချိန်၊ လှီးဖြတ်သည့်ဓါးစသည်၊ ထည့်-ဆေးသည့် အိုးခွက်စသည်များကိုလည်း သတိထား ရန်လိုသည်။
အမျိုးအစားပေါင်း ၁၂ မျိုးတွေ့ ထားပြီးဖြစ်သည်။ အဆီထဲ ပျော်ဝင်သည့်အုပ်စုနှင့် ရေထဲ ပျော်ဝင်သည့်အုပ်စုဟု နှစ်မျိုး ရှိသည်။ Vitamin B, C တို့သည် ရေထဲပျော်ဝင်ကြသည်။ Vitamin A, D, E and K တို့သည် အဆီထဲ ပျော်ဝင်ကြသည်။ ပိုနေလျင် အသဲထဲ၌ သိမ်းထားသည်။ E ကိုမူ အဆီထဲမှာ သိမ်းထားသည်။
Vitamin A (Retinol) အသဲ၊ ဥ၊ နို့နှင့် နို့ထွက်အစာများ၊ မုန်လာဥနီမှာ ပါဝင်သည်။ အရေပြားနှင့် အပေါ်ဖုံးလွှာများ ကောင်းစေရန်၊ အရိုးကြီးထွားရန်၊ ဆဲလ်များအသစ်ပြုပြင်ရန်၊ ခုခံအားကောင်းရန်၊ ကြက်မျက်သင့်ရောဂါကာကွယ်ရန်။
Vitamin B 1, Thiamine (ရိစ်)၊ ဥ၊ အသဲ၊ အစေ့-အဆံ၊ အသားတို့မှာ ပါဝင်သည်။ (ဗယ်ရီဗယ်ရီ)ခေါ်ထုံနာ-ကျင်နာ ရောဂါကို ကာကွယ်သည်။
Vitamin B 2, Riboflavin နို့နှင့် နို့ထွက်အစာများ၊ ဥ၊ အသဲ၊ အသီးအရွက်၊ ဆန်၊ ဂျုံ၊ ရိစ် တို့မှာပါဝင်သည်။ ချို့ တဲ့ပါက ကျီးကန်းပါးစပ်နာဖြစ်စေသည်။
Vitamin B6(Pyridoxine) အချို့ ဆေးဝါးများကြောင့်၎င်း နည်းစေသည်။ ဥပမာ တီဘီ ဆေး၊
Vitamin B9= Folic Acid သွေးနီဥသန်စွမ်းစေရန် အသုံးဝင်သည်။
Vitamin B 12 (Cobalamin) (ရိစ်)၊ နို့နှင့် နို့ထွက်အစာများ၊ ဥ၊ အသဲ၊ ငါး၊ အသားတို့မှာ ပါဝင်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွား စေရန်၊ (ဆဲလ်) တည်ဆောက်ရန်၊ သွေးနှင့် အာရုံကြော ကောင်းစေရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ ၄င်းနည်းပါက Pernicious Anaemia ဖြစ်စေသည်။
Vitamin C (Ascorbic Acid) စိမ်းသော အသီးအရွက်များ၊ အသီးအနှံများမှာ ပါဝင်နေသည်။ အရိုး၊ သွား၊ သွားဖုံး၊ သွေးကြော၊ အရွတ်ကောင်းစေသည်။ ခုခံအားလည်း ကောင်းစေသည်၊ အနာကျက်စေသည်။ ချို့တဲ့ပါက Scurvy ရောဂါ ရစေသည်။
Vitamin D ငါးကြီးဆီ၊ နို့ထွက်အစာများမှာ ပါဝင်သည်။ နေရောင်ကြောင့် Vitamin A မှ Vitamin D ဖြစ်လာစေသည်။ အရိုးတည်ဆောက်ရန် အသုံးကျသည်။ ချို့တဲ့ပါက Rickets အရိုးပြော့ရောဂါဖြစ်စေသည်။
Vitamin E အသီးအရွက်ကရသော ဆီ၊ ဂျုံ၊ ဆန်၊ ပေါင်မုံ့ ၊ ဥ၊ အစေ့အဆံများမှာ ပါဝင်နေသည်။ သွေးဥ၊ ကြွက်သား၊ အာရုံကြောများ အလုပ်ကောင်းစေရန် အသုံးကျသည်။
Vitamin K အသီးအရွက်များမှာပါသည်။ သွေးတိတ်စေသည်။
Basal Metabolic Rate (BMR) လူတိုင်း မည်သည့် အလုပ်အကိုင်မျိုးမှ မလုပ်ဘဲ နေလျင်ပင် အသက်ရှင်နေနိုင်ရန် ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းများ အလုပ်လုပ်နေနိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သော အနည်းဆုံးလိုအပ်ချက် (ကယ်လိုရီ)ကို ခေါ်သည်။ ၄င်းကလိုရီမှာ လူတယောက်နေ့ စဉ် လိုအပ်ချက် စုစုပေါင်း၏ ၆၀-၇၀%ရှိသည်။
ပေါင် ၁၅၀ လေးသည့် လူကြီး (ယောက်ျား) = ၁၈၀၀ ကယ်လိုရီ၊ (BMR)၊
ပေါင် ၁၂၀ လေးသည့် လူကြီး (မိန်းမ) = ၁၃၂၀ ကယ်လိုရီ၊ (BMR) ရှိသည်။
ပိန်သောသူတဦး တနေ့လိုအပ်ချက် = (ကိုယ်အလေးချိန် ပေါင်) x ၁၄ ကယ်လိုရီ၊
မပိန်-မ၀သူတဦး တနေ့လိုအပ်ချက် = (ကိုယ်အလေးချိန် ပေါင်) x ၁၇ ကယ်လိုရီ၊
အလုပ်ကြမ်းလုပ်ရသူတဦး တနေ့လိုအပ်ချက် = (ကိုယ်အလေးချိန် ပေါင်) x ၂၀ ကယ်လိုရီ၊
ပေါင် ၁၂၀ လေးသော အမျိုးသမီးတယောက် အောက်ပါအလုပ်တခုကို ၁၀ မိနစ်ကြာလုပ်လျင် ကုန်မည့် ကယ်လိုရီ၊
• အေရိုးဗစ် သာမန် Aerobics low impact 45.4
• အေရိုးဗစ် အပြင်စား Aerobics high impact 63.6
• ရောဂလေ့ကျင်ခန်း သာမန် Stretching: Mild Yoga 22.7
• အလေးမခြင်း Weight Lifting 54.5
• စက်ဘီစီးခြင်း Bicycling 16-19 mph 109
• ကြိုးခုန်ခြင်း Rope Jumping 90.9
• ၅ မိုင်နှုန်းပြေးခြင်း Running5mph (12 min/mile) 72.7
• ၁၀ မိုင်နှုန်းပြေးခြင်း Running 10 mph (6 min/mile) 145.4
• တင်းနစ်ရိုက်ခြင်း Tennis 72.7
• ပြေး-ခုန်ပစ် Track & Field 54.5
• ၅ မိုင်နှုန်း လမ်းလျောက် Walk:5mph (12 min/mi) 72.7
• တင်းခွဲ Chopping & splitting wood 54.5
• ဥယျာဉ်လုပ် Gardening 40.9
• တံပျက်စီးလှည်း Sweeping 36.3
• ကလေးထိန်း Child-care 27.2
• အိမ်သန့်ရှင်းရေး Cleaning House 27.2
• ထမင်းချက် Cooking / Food Preparation 18.1
• သန့် ရှင်းရေး အပြင်းလုပ်ခြင်း Heavy Cleaning 17.2
• မီးပူတိုက် Ironing 20.9
• အိပ်စက်ခြင်း Sleeping 8.1
• တီဘီကြည့်ခြင်း Watching TV 9.0
• ကွန်ပြူတာစာရိုက် Typing: Computer 13.6
• ကျောက်မီးသွေးမိုင်းအလုပ် Coal Mining 54.5
• လက်သမားအလုပ် Carpentry Work 31.8
• ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် Construction 49.9
For Vitamin and Mineral Supplements Video see http://video.about.com/nutrition/Vitamins-Minerals.htm
Posted by Dr. Tint Swe at 11:22 PM0comments
Q: မရှင်းတာလေး ၁ခုလောက်ရှိလို့ မေးခွင့်ပြုပါဆရာ။ ၀မ်းဗိုက်၏ ညာဘက်ချက်အောက်ဘက်က ဗိုက်အောင့်တိုင်း အူအတက် ဖြစ်နိုင်ပါသလား။ အမြဲတမ်း မအောင့်ပဲ တခါတလေမှ အောင့်ပြီး ၁၅ မိနစ်လောက်နေလျှင် ပြန်ပျောက် သွားပါတယ်။ အောင့်လျှင်လည်း ခါးကုန်းနေသည်အထိ အောင့်ပါတယ်။ အူအတက် သို့မဟုတ် မည်သည့် ရောဂါ ဖြစ်နိုင်ပါသလဲ။ မည်သို့ ကုသ၍ရနိုင်ပါမည်ကိုလဲ ကျေးဇူးပြု၍ ညွှန်ကြားပေးစေလိုပါတယ် ဆရာ။
A: အူအတက်ရှိတဲ့နေရာကို အပြင်ကနေ အတိအကျသိချင်ရင် စိတ်ကူးမျဉ်းဆွဲရတယ်။ “ချက်” ရယ်၊ “တင်ပါးဆုံရိုးပြား ထိပ်နေရာ” ရယ်ကို မျဉ်းတကြောင်းဆွဲပါ။ အဲဒီနေရာဆိုတာက ခါးဘေးအောက်၊ ပေါင်အထက်မှာ လက်နဲ့စမ်းရင် အရိုးမာမာ ဘုကလေးလို ရှိနေတဲ့နေရာပါ။ ပိန်ပိန်-၀၀ စမ်းလို့ရတယ်။ တင်ပါးမှာ ဆေးထိုးတဲ့အခါ အဲဒီအရိုးစွန်းလေးကို လက်မနဲ့ စမ်းပြီးထိုးတာ ကောင်းတဲ့သင်ကြားမှုကို ရထားသူဖြစ်တယ်။
ဆွဲထားတဲ့မျဉ်းကို သုံပိုင်းညီညီ စိတ်ထဲမှာဘဲ ပိုင်းကြည့်လိုက်ပါ။ ချက်ဘက်က ၂ ပိုင်းနဲ့ အရိုးစွန်းဘက်က ၁ ပိုင်း ဆုံရာ နေရာရဲ့ အောက်တည့်တည့်မှာ အူအတက်က ရှိနေတယ်။ အူအတက်မှာ တခုခုဖြစ်ရင် အများဆုံးနာတာက အဲဒီ (ပွိုင့်)မှာ နာတာက အများဆုံး ဖြစ်တယ်။ နည်းနည်းလွဲတာလည်း ရှိတာပေါ့။
အူအတက်ရောဂါတွေမှာ Acute Appendicitis ရုတ်တရက်ရောင်တာရယ်၊ Sub-Acute Appendicitis ရက်ပိုကြာတာရယ်၊ Appendicular Abscess, Burst Appendix ပြည်တည်-ပေါက်ထွက်သွားတာရယ်၊ Appendicular Lump အစိုင်အခဲ ဖြစ်နေတာရယ် ဆိုပြီးရှိတယ်။ ရုတ်တရက်ရောင်ရင် ချက်ချင်းဖြစ်၊ ချက်ချင်း ဆရာဝန်ဆီရောက်၊ ချက်ချင်း ခွဲစိတ်ရတာမျိုး ဖြစ်တယ်။ နာရင်လဲ ခေတ်စကားနဲ့ဆို အသားကုန်နာတာပေါ့။ ပေါက်သွားရင် ရုတ်တရက်ရောင်တာထက် ပိုနာတယ်။
သိပ်မဆိုးလို့ ဆရာဝန်ဆီလည်း မရောက်၊ ပေါက်လဲမထွက်သူတွေက ရက် နည်းနည်းရှိမှ ရောက်လာတတ်တယ်။ ချက်ချင်း ခွဲစရာလည်း မလိုဘူး။ ရက်နောက်ကျမှာလာသူတွေကို ပြောခဲ့တဲ့နေရာကို သေခြာခြာစမ်းရင် အစိုင်အခဲကို တွေ့နိုင်တယ်။ ဒီလိုလူနာကိုလည်း ချက်ချင်းမခွဲဘူး။ ၂ လတန်သည်၊ ၃ လတန်သည် စောင့်ပြီး၊ အေးအေးဆေးဆေး လူနာလည်းအား ဆရာဝန်လည်း အလုပ်မများချိန်မှာ ရက်ရွေးပြီး ခွဲစိတ်ရတယ်။
ပြောတဲ့နေရာမှာ နာတိုင်း အူအတက် ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်တယ်။ အူအတက်ရောဂါဖြစ်တာကို ပိုသေခြာအောင် စမ်းရမယ်။ ဆေးခန်း လက်ထောက်ဆရာမတွေကို သင်ပေးသလို ရေးပါရစေ။ လူနာကို ပက်လက်ထား၊ ဗိုက်ကို လက်ဝါးပြင်နဲ့ အသာအယာ စမ်းပါ။ အူအတက်ရှိတဲ့နေရာကို တခါတည်း သွားမစမ်းသေးနဲ့အုံး။ စမ်းတဲ့လက်နဲ့ လူနာ့ဗိုက် ရင်းနှီး ကြွမ်းဝင်သွားအောင် စကားစမြီပြောရင်း စမ်းပါ။ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်၊ ကိုယ့်လက်ဝါးနဲ့ သူ့ဗိုက်သားနဲ့ အမျိုးတော်နေသလို ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီး စမ်းပါ။ ခဏနေမှ အူအတက်ရှိရာ တည့်တည့်ကို တပဲသားမှ လွဲမသွားအောင် စမ်းပါ။ နာ-မနာ ဆိုတာ သိဘို့ဖြစ်တယ်။ စမ်းနေရင်း လူနာကို နာသလား မေးစရာ မလိုသေးဘူး။ လူနာ့ မျက်နှာကိုသာ ကြည့်နေပါ။ နာတာကို အမူအယာနဲ့ သိနိုင်တယ်။ မျက်နှာ ရှုံ့သွားမယ်။ လိုမှသာ နာ-မနာမေးပါ။
နာတာကို ဘာသာပြန်ရင် Pain, Painful ပေါ့။ အမှန်က ခံစားရသူကနေ “နာတယ်ဆရာ” လို့ ဆရာဝန်က လက်နဲ့မထိခင် ပြောတာကိုသာ အဲလိုခေါ်တယ်။ စမ်းကြည့်တဲ့အခါ နာတာကို Tenderness လို့ ခေါ်ရတယ်။ အူအတက် ရောင်ရင် Pain ရော Tenderness ရောရှိတယ်။ လေနာသမားကို စမ်းရင် Pain ရှိပေမဲ့၊ စမ်းတဲ့လက်ကြောင့် အနာတောင် သက်သာနိုင်တယ်။
နာတာသိယုံနဲ့ “ဟာ အူအတက်ကွ” လို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို (ဂျမ့်ပ်) မလုပ်နဲ့အုံး။ ဆက်စမ်းရအုံးမယ်။ နာပါတယ်ဆိုတဲ့ အူအတက်နေရာကို အသာအယာ ဖိပေးထားပြီး၊ ရုတ်တရက် စမ်းတဲ့လက်ကို ၉၀ ဒီဂရီ ပြန် မ, ပြစ်လိုက်ပါ။ အဲဒီအခါ လူနာ့မျက်နှာ တခါထပ်ရှုံ့လိမ့်မယ်။ မတတ်သာလို့ “မရွှေတက်” နှစ်ခါနာ ဖြစ်အောင်လုပ်ရတာ။ “ဆောရီး” နော်။ ပိုသေခြာလာပြီ။ အဲ့့ လူနာနားက မခွါနဲ့အုံး။
စမ်းတဲ့လက်ကို အူအတက် မရှိတဲ့ ဗိုက်အောက်ပိုင်း ဘယ်ဘက်ခြမ်းကို စမ်းပါ။ မေးရင် မနာဘူးပြောမယ်။ အဲဒီဘက်ကနေ အူအတက်ဆီ တွန်းပေးကြည့်လိုက်ပါ။ ရောင်နေတဲ့ အူအတက်ဆီ တဖက်က အူတွေကို တွန်းဖိပေးလို့ နာပြန်ရတာ ဖြစ်တယ်။ “မရွှေတက်” ခင်ဗျာ တတိယမိနာတယ် ပြောလိမ့်မယ်။ ဒုတိယမိ “ဆောရီး” နော်။
ပိုပိုသေခြာလာပြီ။ ဒါတင်ဘဲလားဆိုတော့ မဟုတ်သေးဘူး။ ကိုယ်ပူတယ် မပြောလည်း အဖျားတိုင်းပါ။ အပူချိန် မြင့်နေရင် ပြောပေတာ့။ “ယူ့ အပဲန်ဒစ် တခုခုဖြစ်နေပြီ” လို့။
တော်တော့ဆရာက ဒါလောက်ဘဲ သင်မယ်။ ကိုယ်သင်တဲ့ ဆရာမ အကုန်အစင် ရစေချင်တယ်။ ဆက်မေးစရာ၊ စမ်းစရာ၊ ကျန်သေးတယ်။ လူနာတွေဟာ တယောက်နဲ့ တယောက် အနာခံနိုင်တာ မတူကြသလို ပညာခံလည်း ကွာတယ်။ တချို့က သဲတယ်။ ပါလာတဲ့ အမျိုးတွေရှေ့ ချွဲချင်လို့ ဟိုနေရာစမ်းလည်း နာတယ်၊ ဒီနေရာလည်း နာတယ်၊ လုပ်တတ်တယ်။ တချို့က ပညာခံနည်းတော့ မပြောတတ်ဘူး။ တိတိပပ သိရအောင်လုပ်ရမယ်။ Sympathy ကို ခဏထား Empathy နဲ့ စမ်းပါလေ။
လူနာက အမျိုးသမီးဆိုရင် ဆက်မေးစရာတွေ ရှိလာပြီ။ အဖြူဆင်းသလား မေးပါ။ ဆင်းရင် ယားသလား မေးပါ။ မွေးလမ်းကြောင်း ရောင်တာလည်း ထည့်စဉ်းစားရမယ်။ သားအိမ်ပြွန် ညာဘက်ရောင်နေရင် အူအတက်နေရာနဲ့ သိပ်နီးလို့ နာတဲ့နေရာ တူတယ်။ အူအတက်က သူချည်းဖြစ်ရင် အဖြူမဆင်းဘူး။ ဘယ်ဘက်ပါ နာချင်နာနေမယ်။ ဒါဆို အူအတက် မဟုတ်နိုင်တော့ဘူး။
ရာသီမှန်-မမှန် မေးပါ။ မမှန်ရင် ထိန်သလား။ အိမ်ထောင်ရှိရင် ကိုယ်ဝန်ရှိလား မေးပါ၊ စစ်ပါ။ ကိုယ်ဝန်နုတုံး၊ သားအိမ်ပြင်ပ၊ ညာဘက်ပြွန်မှာ ကိုယ်ဝန်တည်ရင် ဆင်တူနေပြန်တယ်။
ကလေး-လူကြီး၊ အမျိုးသမီး-အမျိုးသား၊ သန်ကောင်ကိုလည်း ထည့်စဉ်းစားပါ။ Pain ဘဲရှိမယ်။ Tenderness မရှိဘူး။
နောက်တခါ ၀မ်းကိုက်ဘူးတဲ့ ရာဇ၀င်လည်း မေးပါအုံး။ (အမီးဗား) ၀မ်းကိုက်ပိုးက အူမကြီးအစပိုင်း၊ အူအတက် ထွက်တဲ့နေရာ Caecum မှာ လာရောင်တတ်တယ်။ သူကလည်း ဖျားနိုင်တယ်။ အစိုင်အခဲလိုလိုလည်း စမ်းလို့ရတယ်။ Appendicular lump နဲ့ ခွဲသိရမယ်။
ဆီးလမ်းကြောင်းမှာ ကျောက်ကပ်ကနေ ဆီးအိမ်ကို ဆင်းတဲ့ Ureter ဆီးပြွန် ညာဘက်ထဲမှာ ကျောက်က တစ်နေရင်လည်း နာတယ်။ နာတာက အူအတက်ထက်တောင် နာတယ်လို့ ပြောနိုင်တယ်။ ချွေးပြန်တဲ့အထိ။ သူနာတာကို Pain လို့ မခေါ်ဘူး။ Agony လို့ ခေါ်မှ တိကျတယ်။
ချုပ်လိုက်ကြအောင်။ မေးတဲ့သူမှာ Acute Appendicitis မဟုတ်နိုင်ပါ။ လိုတာတွေ စစ်ပါ။ လိုတယ်ထင်သေးရင် မေးပါ။
Q 1: ကျမ အခုနှစ်ပိုင်းမှာ အသားဆိုရင် မည်သည့်အသားပဲဖြစ်ဖြစ် စားပြီးရင် အလာဂျီဖြစ်လာတယ်။ တကိုယ်လုံး အဖုအပိန့်တွေ ထွက်လာပြီး ယားတယ်။ အသားသတ်လွတ် မစားချင်လည်း စားနေရတယ်။ ဘာဆေး သောက်သင့်ပါသလဲ?
Q 2: Allergic ဖြစ်တာကို အမြစ်ပြတ်အောင် ဘာဆေးစားရမှာလဲဆိုတာ လမ်းညွန်ပေးပါဦးဆရာ။ ကျမမှာလေ seafood တွေကိုစားရင် အရမ်းယားပါတယ်၊ ယားတဲ့နေရာက ခနွာကိုယ်က တနေရာပြီး တနေရာ လည့်ပြီးတော့ကို ယားတာ။ အရင်ကတော့ လက်ချောင်းတွေကြားမှာ အရည်ကြည်ဖုလေးထွက်ထွက်လာတယ် ကုတ်ရင် အဖုက ပိုများလာတယ်။
အခုကျတော့ seafood အများကြီးစားမိရင် မိန်းမအဂါင်္စပ်မှာ ယားတဲ့အဖု ထွက်လာပါတယ်။ မကုတ်ရဲဘူး။ တအား များလာမှာ စိုးလို့ပါ။ ယားတာကိုလည်း အမြစ်ပြတ်ချင်လှပါပြီ။ ယားလာရင် ADEZIO သောက်ပါတယ်။ ပိုဆိုးတာက မိတ်ကပ်တွေ လိမ်းရင်လည်း မျက်နှာမှာ ယားတယ်။ အစကတော့ မိတ်ကပ်တွေ မကောင်းလို့ပဲ ထင်ခဲ့တာ။ ဒါပေမယ့် အကောင်းစားတွေလည်း ၀ယ်စမ်းကြည့်ပြီးပါပြီ။ ယားတာပါပဲဆရာ။ အခုက ရိုးရိုး skin naturals lotion တွေကိုပဲ လိမ်းနေရတာ၊ ဘာမိတ်ကပ်မှကို လိမ်းလို့မရပဲဖြစ်နေတာ။ တခါတလေတော့ အလှတော့ ပြင်ချင်တာပေါ့ ဆရာရယ်။ နှတ်ခမ်းနီတွေ လိမ်းရင်လည်း နှတ်ခမ်း ယားတတ်ပါတယ်။ ဘာနှတ်ခမ်း အရောင်တွေကိုမှ လိမ်းလို့မရပါဘူး။ ရိုးရိုး အဆီ lipice တွေပဲ လိမ်းနိုင်တာ။ အဲဒါတောင်မှ NIVEA ကထုတ်တဲ့ lipice strawberry တမျိုးပဲ လိမ်းလို့ရတာ။ အဲဒီ Allergic နဲ့ပါတ်သတ်ပြီးတော့ ကျမဘယ်လိုပျောက်အောင်ကုရမှလဲဆိုတာ လမ်းညွန်းပေးပါဆရာရယ်။ အားကိုးပါတယ်ဆရာ။ ကျေးဇူးလည်း အများကြီးတင်ပါတယ်။
A: “အမေးရှိတော့ အဖြေရှိ၏။ အနာသိ ဆေးရှိ၏။ ဘာမှမပူနဲ့၊ ဆရာနဲ့တွေ့ ပျောက်ပြီသာမှတ်။” အရပ်ဆေးဆရာများ ဆိုရင် အဲလိုပြောလိမ့်မယ် ထင်တယ်။ ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ ဒီလို့။
(အလာဂျီ)ဆိုတာ မေးတဲ့သူ ရေးလိုက်တဲ့အတိုင်း ဖြစ်တဲ့လက္ခဏာတွေက အကုန်မှန်ပါတယ်။ ဖြစ်ရင် အတော် အခံရ ခက်တာ။ ဒုက္ခသေးသေးလေးကနေ အသက်ကိုပါ ရန်ရှာနိုင်တယ်။ Allergic rhinitis ဆိုတဲ့ နှာရည်တွေ တယိုယို ဖြစ်နေတာ။ Asthma ပန်းနာရောဂါ၊ Atopic eczema နှင်းကူနာ၊ Multiple allergies မတည့်ခြင်းပေါင်းစုံ (ပန်းနာ + နှင်းကူးနာ + နှာရည်ယို) အတူတွဲ ဖြစ်နေတာ ဆိုပြီးရှိပါတယ်။ Insect venom သန်း-မှက်-လှေးစတဲ့ အင်းဆက် ကိုက်ခံရတာ၊ Hook Worm ချိတ်သံကောင် ရှိတာ၊ ပန်း-မြက်-သစ်ပင်-ပေါင်းပင်တွေရဲ့ဝတ်မှုံတွေ၊ (ဖန်းဂတ်စ်)မှို၊ အိမ်မွေး တိရစ္ဆာန် ကြောင်၊ ခွေးတွေဟာလည်း (အလာဂျီ)ကို ရစေတဲ့အရာတွေပါဘဲ။
ဒီစာ ကုန်အောင်ဖတ်နေရတာနဲ့ ယားပြီး၊ အဖုအပိန့်တွေ ထွက်ရတဲ့အထဲ ဆေးနည်းမပြောသေးလို့ ဒေါသထွက်နေသလား။ ဒီဆိုရင် ခပ်မြန်မြန် (ဘာမီတွန်) သောက်လိုက်ဗျာ။ “ဆရာရယ် ဒါလောက်တော့ သိပါတယ်။ သောက်နေတာဘဲ၊ ပျောက်မှ မပျောက်တာ။ သက်သာပြီး ထပ်ဖြစ်တယ်ရှင့်”။ နဲနဲအောင့်ထားပြီး ဆက်ဖတ်ပါ။
မတည့်တဲ့အရာတွေထဲမှာ အများဆုံးလည်းဖြစ်၊ အဆိုဆုံးလည်း တစ် ကတော့ Drug allergies ဆေးတမျိုးမျိုးနဲ့ မတည့်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ “ဆေး” ဆိုတဲ့ ဗမာစကားဟာ အတော်ကို ကောင်းတာပါ။ ဆေးလို့ ပြောတာနဲ့ ရောဂါဘယတွေ ကင်းစေမယ်။ ခွန်အားကိုပေးမယ်။ “ပျောက်စေ” ဆိုတဲ့ စေတလုံးပိုင်လို့ အဓိပ္ပါယ်ကို ဆောင်တာပါ။ တကယ်တော့ ဆေးဟာ အကောင်း-အဆိုး ဒွန်တွဲနေတာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်ဆေးမှာမဆို Side-effect ဆိုတဲ့ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးတွေ အနည်းနဲ့အများ ရှိကြတယ်။ အဲဒါတွေထဲမှာ (အလာဂျီ) ဆိုတာက တခုပါ။
Anaphylaxis ခေါ်တဲ့ (ရှော့ခ်) “အပြင်းအထံမတည့်ခြင်း” ကတော့ အသက်ရှူတာ၊ နှလုံးခုန်တာတွေ မမှန်ဖြစ်လာပြီး၊ အရေးပေါ်ဆေးကုမှ အသက်ရှင်နိုင်တဲ့အထိ ဆိုးပါတယ်။
အစားအသောက်ကြောင့် ဖြစ်ရတာကို (အလာဂျီ) အမျိုးအစား(၁)လို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ Food allergies ထဲမှာ Seafood ပင်လယ်စာ၊ နွားနို့၊ ဥ၊ ငါး၊ အစေ့အဆံ၊ အချဉ်သီး၊ ခရမ်းချဉ်သီးတွေပါတယ်။ ကဲ သိပြီနော် အသားတွေကသာ (အလာဂျီ) ရစေတာ မဟုတ်ဘူး။
ခရီးဝေးတခုသွားရင်း တခြားနိုင်ငံတခုမှာ (တက်စီ) သမားနဲ့ လေပေးဖြောင့်လာတော့ သူကမေးတယ်။ “ခုခေတ်မှာ Allergy ဆိုတာ သိပ်ပေါတယ်။ ဘာလို့လဲ” တဲ့။ ကားဆရာအရွယ်က လူကြီးပိုင်းမို့ အတွေ့အကြုံအရ ပြောတာနေမှာပါ။ အရင်က အဲလိုမရှိပါဘူးတဲ့။ ဆိုချင်တာက ကျွန်တော်တို့ဆီမှာသာမဟုတ် သူများတိုင်းပြည်တွေမှာပါ ဒုက္ခပေးပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်တာက အရင်တုံးက မရှိခဲ့တာတွေ အခုရှိလာနေလို့ ဖြစ်ရတယ်လို့ ပြောရမှာပါ။ အရင်က မရှိတာတွေထဲမယ် အစားအသောက်နဲ့ အသုံး အဆောင်တွေ အစုံပါဘဲ။ အသစ်ထွင်လိုက်တဲ့ ပစ္စည်းမျိုးစုံ၊ အစားအသောက်မျိုးစုံ၊ ဒါတွေကြောင့် နောက်ဆက် ဖြစ်လာရတဲ့ အနံ့အသက်သစ်တွေ၊ လူပြောများလာပြီဖြစ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းတာတွေကိုပါ လက်ညှိုးထိုးရမှာ ဖြစ်တယ်။
မတည့်တာတခုခု ကိုယ်ခန္ဓာထဲ ၀င်လာရင် လူကနေ သူ့ကို တန်ပြန်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ (အင်တီဘော်ဒီ) ဆိုတဲ့ ဆေးပညာလို ပြောရရင် IgE တနည်းပြောရရင် “အတွင်းအား” ဆိုတာ အလိုလို ထွက်လာတယ်။ သူ့လူနဲ့ ကိုယ့်လူ ရန်ဖြစ်-စစ်ခင်း ကြတာကို (အလာဂျီ) လို့ ခေါ်လိုက်တာပါဘဲ။ နှာရည်တွေထွက်၊ ယားယံ၊ မျက်လုံးတွေနီရဲ၊ အရေပြား အဖုအပိန့်ထွက်၊ ၀မ်းပျက်၊ စတာတွေ ဖြစ်လာမယ်။
စစ်ကိုင်းဆေးရုံကြီးမှာ တာဝန်ကျတုံးက အပြာဝတ်ဆရာမတဦးရဲ့ခင်ပွန်း ဆံပင်ဆိုးဆေးအသစ် သုံးမိတာ ဆေးရုံတောင် တက်ကုရတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဆံပင်ဆိုးဆေး မှန်သမျှကို မသုံးခင် စမ်းရတယ်။ လက်ဖျံပေါ်မှာ ဆိုးဆေးကို တို့ထားပြီး၊ ၅ မိနစ်၊ ၁၀မိနစ် စဖြင့် စောင့်ကြည့်ရတယ်။ နီရဲ၊ ယားယံလာတာ မဖြစ်မှ ဆံပင်ကို ဆိုးရမယ်။
အနာသိ ဆေးရှိလို့ ဆိုပေမဲ့ အနာထပ်မဖြစ်အောင် ဘာကိုမတည့်တာလည်းဆိုတာ သိဘို့ လိုလာတယ်။ အများစုသော လူနာတွေက ဘာကိုမတည့် ဖြစ်နေတာကို မသိကြပါ။ ဒါ့ကြောင့် ဖြစ်တတ်တဲ့လူတွေ ထပ်ဖြစ်နေရတာပေါ့။ မတည့်ဘူး ထင်တာကို သေခြာအောင်၊ အတိအကျ သိအောင်လုပ်တဲ့နည်းကတော့ Desensitization သွေးစမ်းနည်းနဲ့ အရေပြား စမ်းနည်းဆိုပြီး ရှိပါတယ်။ ကရိကထ အတော်များပါတယ်။
ဒီလိုမျိုး လုပ်နိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်းမရှိရင် ကိုယ့်အား ကိုယ်ကိုးရပါလိမ့်မယ်။ ငါ ဘာနဲ့ တကယ်မတည့်တာလဲ ဆိုတာ စနစ်တကျ ဆန်းစစ်-ရွေးထုတ်-ရှောင်ကျဉ်ပါလေ။ မဲမဲမြင်တိုင်းတော့ တစ္ဆေမမှတ်လေနဲ့။ လူသုံးပုံတပုံလောက်က အစား တမျိုးမျိုး ရှောင်နေကြတယ်လို့ ပြောနိုင်ပေမဲ့ တကယ် မတည့်တာကတော့ ၃% လောက်သာရှိတယ်လို့ သုတေသန လုပ်တော့ တွေ့ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းချင်း နောက်တာရှိတယ် မဟုတ်လား၊ “နင် အရင်စားကြည့်၊ နင် ဘာမှမဖြစ်မှ ဒို့စားမယ်။” ဒါဟာ အတော် ပညာရှိတဲ့နည်းဗျ။
ဗမာလူမျိုးပီပီ ခန့်မှန်းတာကို လွယ်လွယ်ကြီး လုပ်တတ်တယ်။ ဒါကြောင့် ထင်တယ်။ ဒါများလား မသိ။ ဘေးက လူတွေကလည်း စေတနာတော့ ရှိတာပေါ့။ ဟိုဟာက မတည့်ဘူးအေ့။ ဒီဟာကို မစားနဲ့ကွ။ ဒီလိုနဲ့ ရှောင်လိုက်ရတာများ စားစရာကို မရှိတော့ဘူး။ အသားကြောင့်ထင်လို့ (ဗက်ဂျီ) လုပ်လိုက်ရတဲ့အဖြစ်က ဒါ့ကြောင့်ပေါ့။
အမှန်က မတည့်တာ တမျိုးထည်း ဖြစ်လေ့ရှိတာပါ။ တမျိုးမှာတောင် တိတိကျကျပြောရရင် တမျိုးထဲကမှ တမျိုးက မတည့်တာမျိုး။ ခေါင်းရှုတ်မသွားနဲ့၊ ဒီလိုပါ။ ဟင်းတခွက်ချက်ရင် အမယ်မျိုးစုံ ထည့်ချက်ရတယ် မဟုတ်လား။ အဲဒီထဲက နံနံပင် ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ ကြက်သွန်နီ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ ကိုယ်နဲ့မသင့်တာက တခုခုထဲ ဖြစ်မှာပါ။
အသုံးအဆောင်တွေမှာလည်း အဲလိုဘဲ။ ခေါင်းလျှော်ရည်တခုမှာ အမယ်စုံထည့် လုပ်ထားတာကိုး။ မွှေးအောင်လုပ်တဲ့ ဓါတုပစ္စည်းလေးတခုကြောင့် ခေါင်းလျှော်ရည်နဲ့ မတည့်တာဖြစ်စေတယ်။ (ကော့စ်မက်တစ်) လို့ခေါ်တဲ့ အလှသုံး ပစ္စည်းတွေ၊ နေ့စဉ်သုံး ပစ္စည်းတွေထဲက တမယ်မယ်ကနေ ကိုယ်နဲ့မသင့်တာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေတဦးရဲ့ဇနီးဆိုရင် ဆပ်ပြာမှန်သမျှ မတည့်တဲ့ဘ၀ ရောက်နေရရှာတယ်။ သူတို့ အမေရိကားရောက်တော့လည်း ဒီအတိုင်းဘဲတဲ့။ အလာဂျီရလို့ ဗမာပြည်က ခွါတာတော့ မလုပ်နဲ့ပေါ့။
ရှောင်ရန် မသိသေးရင် ဆောင်ရန်ကတော့ Antihistamines ဆေးများပါဘဲ။ Allergy ဖြစ်ရင် သွေးဖြူဥတမျိုးဖြစ်တဲ့ Basophil ကနေ Histamine ထုတ်ပေးတယ်။ ဒါကို ဆန့်ကျင်တဲ့ဆေးပေါ့။ (ဘာမီတွန်) လို ဆေးတွေကို လူတိုင်းလောက် သိနေကြပြီ။ ဒီဆေးမျိုးတွေဟာ Over-the-counter (OTC) drugs လို့ခေါ်တဲ့ ကောင်တာပေါ် တင်ပြီး၊ ဆရာဝန်လက်မှတ် မလိုဘဲ၊ အလွယ်တကူ ၀ယ်ယူနိုင်တဲ့ ဆေးအမျိုးတွေထဲမှာ ပါတယ်။ ဆေးပြားသာမက အရေးပေါ်လိုရင် ထိုးဘို့ ထိုးဆေး၊ လိမ်းဆေး၊ ရှူဆေးနဲ့ မျက်စဉ်းတောင် ရှိပါတယ်။
(အင်တီ-ဟစ်စ်တမင်း) တွေဟာ အိပ်ချင်၊ ခေါင်းကိုက်၊ မျက်စိမြင်ေ၀၀ါး၊ ၀မ်းချုပ်၊ အာခြောက်၊ ခေါင်းမူး၊ ဆီးသွားရခက်၊ ခေါင်းမကြည်မလင်ဖြစ်တတ်တဲ့ ဘေးထွက်မကောင်းကျိုးတွေရှိပါတယ်။ ခုခေတ်မှာတော့ အိပ်ချင်စေခြင်းမရှိတဲ့ ဒုတိယ၊ တတိယမျိုးဆက်ဆိုတာတွေ ပေါ်လာပါပြီ။ တကယ်လို့ ထပ်သိချင်ရင် ဆက်ဖတ်ပါ။
Alimemazine (Trimeprazine), Chlorphenamine (Chlorpheniramine), Clemastine, Cyproheptadine, Hydroxyzine, Promethazine ဆိုတာတွေ ဖြစ်နေရင် သိပ်အကောင်းကြီး မဟုတ်သေးဘူး။ ဒီဆေးတွေက အိပ်ချင်တယ်။ အလုပ်လုပ်စရာမရှိအောင် ကံကောင်းသူများဆိုရင်တော့ အံကိုက်ဘဲ။ ဆေးနဲ့ မှိန်းနေပေါ့။
Acrivastine (Semprex, Benadryl), Cetirizine (Zirtec, Zyrtec), Desloratadine (Neoclarityn), (Telfast 120, Telfast 180, Allegra), Loratadine (Clarityn, Clarityne, Boots Antihistamine Tablets, Claritin), Mizolastine (Mizollen, Mistamine) တွေကတော့ အိပ်ချင်စေခြင်းမရှိတဲ့ ဒုတိယမျိုးဆက်မို့ ပိုကောင်းတယ်လို့ ညွှန်းလိုက်ပါတယ်။
(အလာဂျီ)ရတတ်သူများ လက်ကိုင်အိပ်ထဲမှာ ZYRTEC (Cetirizine hydrochloride) ကို ဆောင်ထားပါ။ စားဆေး၊ သောက်ဆေး။ သူက5mg, 10 mg ဆိုပြီးလာတယ်။ အသက် ၆ နှစ်အထက်ဆိုရင် တနေ့ တပြား။ အစာနဲ့နီးမှ ဝေးမှ ဆိုတာ မရှိဘူး။ ရောဂါပြင်းရင်တော့ ပိုသောက်ရမယ်ပေါ့။ တနေ့ကို နှစ်ခါ ခွဲသောက်လဲရတယ်။ အသက်ငယ်ရင် ကိုယ်အလေးချိန်အလိုက် လျှော့သောက်ရမယ်။ တ၀က်၊ လေးပုံတပုံ။ တဆက်တည်း မှတ်ထားပေါ့၊ ဆေးဆိုတာ ကိုယ်အလေးအချိန်နဲ့ ပေးရတာ။ ဇာတာသက်ကြည့် ပေးတာ မဟုတ်ပါ။
ပုရွက်ဆိတ်ကိုက်ရင်၊ ခြင်ကိုက်ရင် လိမ်းဘို့ ပရုပ်ဆီအနီ အသုံးကျပါတယ်။ (အင်တီ-ဟစ်တမင်း) ပါတဲ့လိမ်းဆေးလည်း သုံးနိုင်သလို၊ Xylocaine (Lidocaine) 2% ထုံဆေးပါတဲ့လိမ်းဆေး၊ Calamine Lotion တို့က ချက်ချင်းဆိုသလို ယူပစ်သလို၊ အနာ-အယား သက်သာသွားမယ်။
(အလာဂျီ)က မိဘမျိုးရိုးလိုက်တတ်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် “အမေ-အဖေကို ရွေးပြီးမှ အမျိုးတော်ကြပေတော့။” ငယ်တုံးက မတည့်ပေမဲ့ ကြီးလာတော့ ရှောင်စရာမလိုတော့တာလည်း ဖြစ်တတ်တယ်။ လူကြီးများ ဒီနေရာမှာ ကံကောင်းတယ်နော်။ စက်ရုံတွေပေါတဲ့နေရာ၊ လူတွေရှုတ်တဲ့မြို့ကြီးတွေမှာ ပိုဖြစ်တတ်တယ်။ တောသူတောင်သားတွေက ဒီတချက်မှာ သာတယ်။ ယောက်ျားလေးများက မိန်းကလေးတွေထက် အဖြစ်များသတဲ့။ “အမျိုးသမီးများ ဂုဏ်ယူကြပါလေ။” ဆေးစာထဲ ရေးတာသာ ပြောတာပါ။ (အလာဂျီ) အကြောင်း လှမ်းမေးတာက အမျိုးသမီးတွေချည်း ဖြစ်နေတာမို့ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေ သုတေသန လုပ်တဲ့အထဲ ပါသွားကြပုံမရဘူး။ နောက်တခါလာရင် ရှေ့ကနေ။
(ကော့စ်မက်တစ်) ကို ရှောင်နိုင်သမျှ ရှောင်ပါ။ သဘာဝပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ သနပ်ခါး၊ နံ့သာဖြူ၊ နံ့သာနီ၊ ကရမက်ထက် မက်စရာ မရှိပါ။ အသစ်တွေ ဘယ်လို ဆန်းဆန်း၊ အကောင်းစားလို့ ဘယ်လိုကြွားကြွား၊ သဘာဝ၊ ရိုးရာ၊ ထုံးစံ၊ မဟုတ်တာ မှန်သမျှ မေးခွန်းထုတ်ခံနေကြရပါပြီ။ (အလာဂျီ) ဟာ (အေလီယံ) သဘောဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Dr. Tint Swe at 2:14 PM0comments
အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ (၁၅)
အမျိုးသမီး မွေးလမ်းကြောင်း (ဗဂျိုင်းနာ) ကနေ အဖြူဆင်းတာဟာ အများအားဖြင့် (နော်မယ်)ပါ။ အနည်းနဲ့အများ အဖြူ ဒါမှမဟုတ် အရည်လိုမျိုး ဆင်းနေတယ်-စိုနေတယ်။ သတိမထားရင်တောင်မှ ရှိနေတတ်တယ်။ သားအိမ်အဝနဲ့ မွေးလမ်းမှာ အရည်ထွက်နိုင်တဲ့ (ဂလင်း)ခေါ် အိပ်တွေရှိလို့ဖြစ်တယ်။ အဟောင်းတွေပျက်စီး အသစ်တွေ ဖြစ်နေတဲ့ အနိစ္စသဘောပါဘဲ။
ဖြစ်နေကြမျိုးကတော့ စိုးရိမ်စရာမရှိ၊ ဆေးကုဘို့ မလိုပါ။ ပုံမှန်ဆင်းတာမျိုးက ကြည်တယ်။ မကြည်ရင် နို့လိုနေတယ်။ ဒါပေမဲ့ အနံ့မရှိဘူး။ အရောင်နဲ့ အပျစ်အချွဲကတော့ ပြောင်းလဲနေတယ်။ လအစမှာ ပြစ်ပြီး၊ ဖြူတယ်။ လအလယ်လောက် ဆိုရင် များလာမယ်။ တိတိကျကျ ပြောရရင် အဆ ၃ဝ တောင်များလာတယ်။ နောက်ပြီး၊ မပြစ်ဘဲ ချွဲမယ်။ ပိုပြီးကျဲတယ်၊ (အလပ်စတစ်) ပိုဖြစ်တယ်။ ရာသီမဆင်းခင်လေး ဆင်းတတ်တာက ပိုပျစ်တယ်။ ရာသီအပြီးမှာ ညိုမယ်။
လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပြီးချိန်မျိုးမှာလဲ ရေသာသာ ခပ်ကြည်ကြည် အရည်လိုဆင်းတာ ပုံမှန်ပါ။ မ-မျိုးဥ ထွက်ချိန် လယ်ရက်မှာ သွေးစက်ကလေးမျိုးပါ အတွင်းခံကို လာစွန်းနေတတ်သေးတယ်။ ဒါလည်း (နော်မယ်လ်)ဘဲ။ နောက်ပြီး ကလေး နို့တိုက်နေချိန်တို့ လိင်စိတ်ဖြစ်လာချိန်တို့မှာ ပိုဆင်း-ပိုစိုလာတယ်။ ဒါလည်း ရောဂါမဟုတ်ပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် ဆင်းတာက ခပ်ကျဲကျဲ၊ ခပ်ဖြူဖြူ၊ နဲနဲ အနံ့တော့ရှိတယ်။ ဗက်တီးရီးယားတွေ ပါနေပေမဲ့လည်း ဒုက္ခ မပေးပါ။ ဆီးချိုရှိရင်၊ သန္ဓေတားဆေးစားစဉ်၊ ပဋိဇီဝဆေးတချို့သောက်နေစဉ်၊ သွေးအားနည်းရင်၊ နာတာရှည် ရောဂါ ရှိနေရင် ပိုတတ်တယ်။
အဆင်းများ၊ အရောင်ပြောင်း၊ အနံ့ရှိလာရင် ဂရုစိုက်ရပါတော့မယ်။ ပူစပ်မယ်၊ အ၀ါရောင်ဖြစ်မယ်၊ ခပ်စိမ်းစိမ်းဖြစ်မယ်၊ ခပ်ပျစ်ပျစ် ဖြစ်မယ်၊ ယားမယ်၊ ဆီးစပ်နေရာ နာမယ်ဆိုရင်တော့ ဆေးကုရပါလိမ့်မယ်။ ရောဂါပိုးတွေကလဲ အမျိုးမျိုးပါ။ ဗက်တီးရီးယား၊ ဗိုင်းရပ်စ်၊ ဖန်းဂတ်စ်၊ ပရိုဇိုးဝါး နဲ့ ပါရာဆိုက်၊ အကောင်စုံပါဘဲ။ ဝင်တဲ့ ပိုးအမျိုးအစားအလိုက် ဆင်းတာတွေ မတူဘူး။ အပျိုဆိုလည်း ဆေးကုရမှာမျိုး ဖြစ်တတ်တယ်။ နည်းပါတယ်။ ကျား-မ အတူနေသူများ STD/STI လိင်ကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါ တခုခုဖြစ်လို့ အဖြူဆင်းရင် နှစ်ယောက်လုံးကို တပြိုက်နက် ဆေးကုရပါမယ်။
၁။ Yeast infection (Candidiasis) (Monilia, Thrush) (ရိစ်) ကြောင့် မွေးလမ်းကြောင်းရောင်ခြင်း
အဖြူရောင် ပြစ်တဲ့ (ချိစ်) လိုဆင်းတယ်။ အလွန်ယားပြီး၊ မိန်းမကိုယ် နီနေမယ်။ နာမယ်။ ဆီးအောင့်မယ်။
• Diflucan (Fluconazole) 150 mg တခါတည်းသောက်ပါ။ လိုအပ်ရင် ရက်ပိုပေးပါတယ်။
• Nystatin, Mycostatin စားဆေး၊ (400,000 to 600,000 units) တနေ့ ၄ ကြိမ်သောက်ပါ။
• Clotrimazole vaginal tablet မွေးလမ်းထဲထည့်ရန်ဆေး၊ 100 mg ၆ ညထည့်ပါ။ 200 mg ၃ ညထည့်ပါ။
၂။ Cervical Ectropion, Erosion ဒါမှမဟုတ် Eversion
၃။ Cervicitis သားအိမ်အဝရောင်ခြင်း
ဆီးစပ်နာမယ်။ ခပ်ချွဲချွဲ နှင့် ပြည်လိုဆင်းမယ်။ သားအိမ်အဝ ထိရင်နာမယ်။ လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါ နာမယ်ဆိုရင် ပဋိဇီဝဆေး ပေးနိုင်တယ်။
၄။ Chancroid (ရှိန်ကာရွိုက်) သားအိမ်အဝမှာ အနာ
STD/STI လိင်ကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါ အနာဖြစ်တယ်။ အနာရဲ့ နုတ်ခမ်းသား မညီမညာဖြစ်မယ်။ အခြေက ခပ်မွဲမွဲ အရောင်ရှိမယ်။ ထိရင်နာမယ်။ လိင်အင်္ဂါမှာ အနာ-အကြိတ် ပေါ်မယ်။ ပေါင်ခြံက အကြိတ်တွေ ရောင်လာတယ်။
၅။ Chlamydial infection (ကလင်ဒါမိုင်စင်) မွေးလမ်းကြောင်းရောင်ခြင်း
STD/STI ရောဂါတွေထဲမှာ Chlamydia trachomatis က အဖြစ်အများဆုံးပါ။ လိင်အင်္ဂါတွေမှာ အနာဖြစ်တာပါ။ အနာ ဆိုပေမဲ့ မနာဘူး။ ပေါင်ခြံမှာ တက်စေ့တွေ ရောင်လာမယ်။ အမျိုးသမီးများ သားအိမ်အဝမှာ အဖြစ်များတယ်။ ဆင်းတာက ပြည်လိုနေတယ်။ နဲနဲဝါမယ်။ မီးခိုးရောင်၊ ခပ်စိမ်းစိမ်း အရောင်လဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ အမြှုတ်လိုလဲ ရှိတတ်တယ်။ ယားမယ်။ အနံ့ဆိုးတယ်။ သွေးနဲနဲလဲ စွန်းနိုင်တယ်။ ဆီးခဏခဏ သွားချင်ပြီး ဆီးအောင့်တယ်။ အတွင်းအင်္ဂါတွေအထိ ရောက်နိုင်တယ်။ ဒီအချိန်မှာ လိင်ဆက်ဆံရင် နာမယ်။
• Azithromycin 1 Gm သောက်ပါ။
• Doxycycline 100 mg တနေ့ ၂ ကြိမ် ၇-၁၄ ရက်။
• Erythromycin 250-500-800 mg တနေ့ ၄ ကြိမ်၊ ၇-၁၄ ရက်။
• Ofloxacin 300 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၇ ရက်၊
• Ofloxacin = 400 mg တခါတည်းသောက်ပါ။
၆။ Bacterial Vaginosis (Hemophilus, Gardnerella) ဗက်တီးရီးယားကြောင့် မွေးလမ်းကြောင်း ရောင်ခြင်း
ခပ်ကျဲကျဲ၊ ကြည်တဲ့ ဖြူဝါတဲ့ အနံ့ဆိုးတဲ့အရည်ဆင်းတယ်၊ ယားမယ်၊ လိင်ဆက်ဆံ ပြီးရင် ပိုဆိုးတယ်။ နောက်ဆက်တွဲ အဖြစ် (PID) တင်ပါးဆုံတွင်းအင်္ဂါတွေ ရောင်တာဖြစ်နိုင်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ရှိရင် ရေမြွှာအိတ် ရောင်တာ၊ သားအိမ်ရောင်တာ ဖြစ်စေမယ်။
• Metronidazole 500 mg တနေ့ ၂ ကြိမ် ၇ ရက်၊
• Metronidazole2g တခါတည်းသောက်။
• Clindamycin cream 2% ညအချိန်၊ ၇ ရက်ထည့်ပါ။
• Clindamycin 300 mg တနေ့ ၂ ကြိမ် ၇ ရက်သောက်ပါ။
၇။ Gonorrhea ဂနိုးရီးယား
ဒုတိယအများဆုံး STD/STI ဖြစ်တယ်။ အမျိုးသမီးဆိုရင် အဖြူဆင်းမယ်။ ပြည်လိုဆင်းမယ်။ ဆီးက ပန်းထွက်သလို သွားတယ်။ ကြားရက် သွေးဆင်းတာ ဖြစ်တတ်သေးတယ်။ ဆက်ဆံရင်လဲ နာမယ်။ အထဲကို ရောဂါပြန့်ရင် သားအိမ် ဘေးက အင်္ဂါမှန်သမျှ ရောင်နိုင်တယ်။ ဆေးမကုရင် ယောက်ျားရော မိန်းမပါ ကလေးမရတာ ဖြစ်သွားတတ်တယ်။
• Ceftriaxone 125 mg IM ထိုးပါ။
• Ciprofloxacin 500 mg သောက်ပါ။
• Ofloxacin 400 mg သောက်ပြီး Azithromycin 1 g ဒါမှမဟုတ် Doxycycline 100 mg တနေ့ ၂ ကြိမ် ၇ ရက် နဲ့တွဲပါ။
ကလေးခြားအောင်ထည့်တဲ့ IUCD ထည့်သူ ၅% မှာ ပိုးဝင်တတ်တယ်။ ဗိုက်အောက်ပိုင်းနေရာ နာမယ်။ မွေးလမ်းက တခုခု ဆင်းမယ်။ နဲနဲကိုယ်ပူမယ်။ လိင်ဆက်ဆံရင် နာမယ်။
IUCD ပြန်ထုတ်ပါ။ Amoxicillin, Cephalosporins, Tetracycline ပေးပါ။ မရသေးရင် Cefoxitin ဒါမှမဟုတ် Metronidazole plus Gentamicin ဒါမှမဟုတ် Clindamycin plus Gentamicin ထိုးပေးပါ။
၉။ PID (Pelvic Inflamatory Disease) မဆိုးတဲ့ တင်ပါးဆုံအတွင်း အင်္ဂါများရောင်ခြင်း
နဲနဲဖျားမယ်။ လိင်ဆက်ဆံရင်နာမယ်။ ပြည် ဒါမှမဟုတ် ခပ်ချွဲချွဲဆင်းမယ်။ ဗိုက်အောက်ပိုင်းနေရာနာမယ်။ သွေးဖြူဥ အရေ အတွက် များလာမယ်။
• Doxycycline 100 mg တနေ့ ၂ ကြိမ် ၁၀-၁၄ ရက်ကို Cefoxitin 2.0 gm IM တွဲ ထိုးပါ။
• Cefoxitin 1.0 gm သောက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် Ceftriaxone 250 mg IM ဒါမှမဟုတ် Ceftizoxime 1 gm IM ဒါမှမဟုတ် Cefotaxime 0.5 gm IM ထိုးပါ။
၁၀။ Severe PID (Pelvic Inflamatory Disease) ဆိုးတဲ့ တင်ပါးဆုံအတွင်း အင်္ဂါများရောင်ခြင်း
• Cefotetan2gm IV တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၂ ရက်၊ နောက် Doxycycline စားဆေး ၁၀-၁၄ ရက်၊ ဒါမှမဟုတ်
• Clindamycin 900 mg ထိုးဆေး တနေ့ ၃ ကြိမ် ကို Gentamicin, 1.5-2.0 mg/kg IV/IM ထိုးဆေးတွဲပေးပါ။ နောက်ပြီး Doxycycline 100 mg တနေ့ ၂ ကြိမ် စားဆေး ၁၀-၁၄ ရက်၊
၁၁။ Trichomoniasis ထွိုင်ကိုမိုးနပ် မွေးလမ်းကြောင်းရောင်ခြင်း
အနေအထိုင်ခက်ပြီး၊ အဖြူ (အမြှုတ်) ဆင်းမယ်။ မွေးလမ်း၊ မိန်းမကိုယ် နီမယ်။ စိမ်းဝါတဲ့ အနံ့ဆိုးတဲ့ အရည်ဆင်း၊ ယားတယ်။
Vaginal Infections မွေးလမ်းကြောင်းရောင်တာက သန့်ရှင်းရေး နည်းလို့လည်း ဖြစ်တတ်တယ်။ ပိုးက အဝတ်စိုလိုမျိုးမှာ ၁ နာရီ လောက် ရှင်နေနိုင်လို့ အတူသုံးမိရင် ကူးနိုင်တယ်။ ဖိုဆိုရင် ယင်ဖိုတောင် မသန်းဘူးတဲ့ အမျိုးသမီးများမှာတောင်မှ ဗက်တီးရီးယား အရေအတွက် အပြောင်းအလဲကြောင့် ဖြစ်ရတတ်တယ်။ သန့်ရှင်းရေး လုပ်တဲ့အခါ ရှေ့ကနေ နောက်ဖက်ဆီ လုပ်ပါ။ အတွင်းခံ သန့်နေပါစေ။ ခြည်ထည်ကိုသာ သုံးပါ။ ဖြန်းဆေးတွေ မသုံးပါနဲ့။ ရေမွှေး၊ ဆပ်ပြာ အပြင်စားတွေ မသုံးလေနဲ့။
Metronidazole 250 mg တနေ့ ၃ ကြိမ်၊ ၇ ရက်။ ဒါမှမဟုတ်2gm တခါတည်းသောက်။ ဒါမှမဟုတ် 500 mg တနေ့ ၂ ကြိမ် ၅ ရက်သောက်ပါ။
Q and A on Early ejaculation သုတ်လွှတ်စောခြင်း အမေး-အဖြေ။
Q: အသက်၂၂-၂၃ နှစ် အိမ်ထောက်ကျခါစ သုတ်လွှတ်စောနေလို့ မေးလာတဲ့ မေးခွန်း။ ယောက်ျားလေးက ငယ်စဉ်မှာ (မာစတာဘေးရှင်း) လုပ်ခဲ့လိုများလားလို့ ထင်နေပြီး၊ ဇနီးကတော့ အရမ်းကောင်းတဲ့ ခံစားမှုတော့ ရပေမဲ့ ပြီးဆုံးတဲ့အဆင့် မရောက်နိုင်ဘူး လို့ဆိုပါတယ်။
A: ခင်ဗျားတို့ အဆင်ပြေမှာပါဆိုတာ စာဆက်မဖတ်ခင် အရင်မှတ်ပါခင်ဗျား။ အသက်၂၃ နှစ် သက်တူရွယ်တူတွေဆိုတာ သင့်မြတ်တဲ့ အိမ်ထောင်သည် ဆက်ဆံရေးဘ၀မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ အတွေ့အကြုံ တခါမှ မရှိခဲ့ဘူးသူတွေဖြစ်တာလဲ အလွန် အဆင်ပြေပါတယ်။ အိမ်ထောင်သက်နုချိန်မှာ အရမ်းကောင်းတဲ့ (ဖီလင်) အထိရောက်ရင်ကို တော်လှပြီလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ အကြီးအကျယ် စိတ်ဆင်းရဲတာကို လုံးဝဖျက်လိုက်ပါ။ သာမန်ကာရှန်ကာ အားပေးတာ မဟုတ်ပါ။
သုတ်လွှတ်တာ အရမ်းမြန်နေသေးတာက ပုံမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ကြောင်းကိစ္စ ဘာတခုခုကြောင့်မှ မဟုတ်နိုင်ပါ။
Masturbation လုပ်တာကြောင့် ဘာမှ ပြဿနာမရှိပါ။ အဲလိုထင်နေတာကို ဖျောက်ပြစ်လိုက်ပါတော့။
သူ့က မပြီးဘူးဖြစ်နေတာက ပိုပြီး နော်မယ် ဖြစ်တယ်။ တချို့အိမ်ထောင်ကျ အမျိုးသမီးတွေ နှစ်တွေ ကြာလာတာတောင်မှ Orgasm ပြီးတယ်ဆိုတာကို မသိကြပါ။ ဒီလိုဖြစ်တာကို ကြားဘူးနားဝ ရှိနေသူဆိုရင် ခံစားကြည့်ဘူးချင်မှာပေါ့။ အများစု အမျိုးသမီးများဟာ Orgasm မရပေမဲ့ အလိုမကျဘူး၊ ဖေါက်ပြန်ချင်တယ် ဆိုတာက ရှာမှရှားဖြစ်ပါတယ်။ အနောက်နိုင်ငံ တွေမှာတောင် ၁ဝ-၂ဝ% တခါမှ မဖြစ်ဖူးဘူး၊ ၅ဝ%က ဆက်ဆံတိုင်း မပြီးကြဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ဗမာပြည်မှာ ဒီထက် % တွေများအုံးမယ်။ အမျိုးသမီးတွေက ယောက်ျားတွေနဲ့ မတူပါ။ အမြဲတမ်း Orgasm ရဘို့ မလိုပါ။ နီးစပ်တဲ့အဆင့်ဆိုရင် ကျေနပ်ကြပါတယ်။ တခါပြီးတာမြန်သွားရင် နောက်တခါ ဆက်ဆံပေးပါ။ တခါထက်တခါ ကြာလာမှာ သေခြာပါတယ်။
ထုံဆေး၊ Xylocaine သုံးကြည့်ချင်လဲ သုံးနိုင်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာ ဘယ်လို အမျိုးအစားရမယ် သိပ်မသိပါ။ Burocaine လို့ BPI ကထုတ်ဘူးတယ်။ ထိုးဆေး၊ လိမ်းဆေး၊ ပန်းဆေး၊ အမျိုးမျိုးကို ဒီနာမည်နဲ့လာပါတယ်။ ၂%၊ ၅% ဘာဖြစ်ဖြစ် ရတယ်။ ထိုးဆေးပုလင်းထဲက ဆေးရည်ကို အရေပြားပေါ် တင်တာရော၊ မျက်စဉ်းအဖြစ်ရော သုံးနိုင်လို့ အန္တရာယ်မရှိပါ။ ၃-၅ မိနစ်ဆို ထုံလာတယ်။ ပန်းအဖျားမှာ သုတ်လိမ်းပေးပါ။ အရေပြားကနုလို့ ပိုမြန်မြန်ထုံလာစေနိုင်တယ်။ လိမ်းဆေးက ညှစ်ဘူးနဲ့ လာတာာ။ အားကစားသမားတွေ ထိခိုက်မိရင် ပန်းပေးတာမျိုးကလဲ ထုံဆေးဘဲ၊ ဒါပေမဲ့ အေးခဲသွားစေတာမျိုး ထည့်ထားတာ။ ဒါ့ကြောင့် ရိုးရိုးထုံဆေးသာ သုံးပါ။ ထုံဆေးကြောင့် ခံစားမှုမရှိ ဖြစ်နေမှာ။ တခုသတိထားဘို့က ခံစားမှု ကောင်းလွန်းလာတာကို စိတ်နဲ့ပါ ထိန်းလို့လဲ ရတယ်။ အလေ့အကျင့်တော့ လိုတာပေါ့။ အဲဒီအချိန်မှာ စိတ်ကို ပြောင်းရတယ်။ ပြောင်းတာကိုလဲ အင်္ဂါညှိုးသွားတဲ့ အထိတော့ မလုပ်နဲ့ပေါ့။ ထုံဆေးကြောင့် ဘာနောက်ဆက်တွဲမှ မဖြစ်နိုင်ပါ။ သိပ်ရှားရှားပါပါး ဆေးမတည့်သူတော့ ရှိနိုင်တယ်။ ဘယ်ဆေးမှာမဆိုဖြစ်တတ်တာမျိုးပါ။ မတည့်ရင် ယားယံ၊ နီရဲတာသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာ့အမြင်ကတော့ ဆေးမလိုဘဲ အဆင်ပြေလာမှာပါ။ တခြားစားဆေး၊ အားဆေးစတာတွေ အားကိုးဘို့ မလိုပါ။ Viagra ဆေးက ပန်းညှိုးချင်သူတွေအတွက်ပါ။ ပုံမှန် ကျန်းမာရေးကောင်းနေရင် ရပါတယ်။ ဗီတာမင် ဘီအုပ်စု၊ ဒါမှမဟုတ် (မာလ်တီဗီတာမင်) စားဆေးတခုခု သောက်နိုင်ပါတယ်။ အရပ်စကားအရ ငှက်ပျောသီး၊ ကြက်ဥ စတာတွေက စိတ်ထက်သန်စေဘို့ ရည်ရွယ်ပုံ ရပါတယ်။ နှေးစေဘို့ မဟုတ်လောက်ပါ။
Oral practice ကို နှစ်ယောက်စလုံးက ရောဂါရှင်းရင် သုံးပါ။ တခုသတိထားပါ။ ယောက်ျားကို မိန်းမကနေ လုပ်ပေးရင် ယောက်ျားအင်္ဂါ မြန်မြန်သန်မာလာသလို မထိန်းတတ်ရင် အဲဒီအဆင့်မှာကို သုတ်လွှတ်ချင်လာလိမ့်မယ်။
အမျိုးသမီးကနေ ပါးစပ်နဲ့သာ လုပ်ပေးယုံမက လက်ကပါ မာစတာဘိတ် လုပ်ပေးသလို လုပ်ပေးရတယ်။ တိတိကျကျ ပြောရရင် ပါးစပ်တလှည့်၊ လက်တလှည့် လုပ်ပေးတာပါ။ အဲဒီအချိန်မှာ ယောက်ျားအဖို့ သိပ်ကောင်းတဲ့ ခံစားမှု ရှိလာမယ်။ မိမိဖါသာ မာစတာဘိတ် လုပ်တာက အနှေးအမြန်၊ အထိအတွေ့ကို ထိန်းတတ်ပေမဲ့ မိန်းမက လုပ်ပေးတဲ့အခါ ကိုယ်ကနေ ပြောပြပေးဘို့ လိုလာမယ်။ နေအုံး၊ နာအုံး၊ စသဖြင့် ပြောရမယ်။ မဟုတ်ရင် ကိုယ်က တခါတည်း ပြီးစီးသွားမယ်။
အခုလိုအခြေအနေမျိုးမှာ ယောက်ျားကနေ မိန်းမကိုလုပ်ပေးတာက ပိုသင့်ပါမယ်။ ရှင်းအောင်ရေးရရင် မိန်းမရဲ့ အင်္ဂါမှာ နှုတ်ခမ်းကြွက်သား အတွင်းအပြင်ရယ်၊ အဝရယ်၊ အစိနေရာရယ်ကို ထိမိစေသင့်တယ်။ အဓိကကတော့ အဝအထက်နားက အစိနေရာတ၀ှိုက်ကို ထိမိစေသင့်တယ်။ အဲဒီနေရာက အာရုံခံမှု အများဆုံးဖြစ်တယ်။ သတိထားဘို့က အမျိုးသမီး တယောက်နဲ့ တယောက် မတူတာရှိတယ်။ တချို့က အစိကို လက်နဲ့ ပွတ်သပ်တာကို သိပ်မခံနိုင်ဘူး။ လျှာနဲ့ဆို ရတယ်။ တချို့က ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ် ရတယ်။ မနာကျင်စေအာင် လုပ်ပေးရပါမယ်။ လျှာက နူးညံ့တယ်။ သူက သဘောကျတယ် ဆိုတာကို လုပ်ပေးသင့်တယ်။
အမျိုးသမီးကို အဲလို မိမိလျှာနဲ့ သာယာစေအောင် လုပ်ပေးနေချိန်မှာ ကိုယ့်သာယာမှုကို ဘေးချိတ်ထားဘို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆင့် တိုးတက်လာရင်တော့ နှစ်ယောက်လုံးက အပြန်အလှန် တပြိုင်နက်တည်း လုပ်ပေးတာ လုပ်လို့ရမယ်။ 69 လို့ ခေါ်တာပေါ့။ စောစောပိုင်းမှာ သူ့သာယာမှု အတွက်သာ ရည်ရွယ်ပါ။ သူအနေနဲ့ သာယာမှု တဝက်လောက်အထိ ရောက်လာမှ အင်္ဂါချင်း ထိတွေ့တာကို ဆက်ပေးတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။
ထပ်ဖြည့်ပါမယ်။ အမျိုးသမီးကို (ဖိုးပလေး) ဦးစားပေးပါ။ သူစိတ်ပါလာအောင် နည်းတွေသုံးပါ။ အကြား၊ အသံ၊ အမြင်၊ အနံ့ စတာတွေကို လွယ်တာ၊ လက်လှမ်းမီတာ လုပ်ပေးပါ။ ကိုယ်ခန္ဓာကို ထိတွေ့ပွတ်သပ်မှုကို ရင်သား၊ တင်ပါးစသဖြင့်။ ရင်သားကို အချိန်ယူသင့်ပါတယ်။ သူ့အင်္ဂါ စိုစွပ်လာစေမယ်။ သိပ်တော့အချိန် မများသင့်သေးပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ တယောက်ကဖြစ်ဖြစ်၊ နှစ်ယောက်လုံးဖြစ်ဖြစ် (ဖိုးပလေး) လုပ်တာနဲ့ နောက်အဆင့်တက်ဘို့ သိပ်ဆန္ဒ များလာရင် တကယ်စတာနဲ့ အလောတကြီး ဖြစ်မယ်၊ သာယာမှုတော့ သိပ်ကောင်းမယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မြန် ပြီးတတ်နိုင်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် ယောက်ျားအတွက် မဟုတ်စေအာင် လုပ်သင့်တယ်။ သူ့အတွက် ဦးစားပေးပါ။
နောက်ထပ်ဆင့် အကြံပေးရရင် အမျိုးသမီးက ဆက်ဆံနေချိန်မှာ သူ့သဘောကျအတိုင်း လှုပ်ရှားပေးသင့်တယ်။ သူ့ရဲ့ အာရုံခံ အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ အစိကို ကျားအင်္ဂါနဲ့ ထိပွတ်မှုဖြစ်အောင် အမျိုးသမီးက သူ့ခါးကို ပြင်ပေးတာမျိုးပါ။ သူဘဲ သိပါလိမ့်မယ်။ သူသဘောကျတာကို လုပ်ဖြစ်အောင် အားပေးပါ။ ယောက်ျားက အလိုက်သင့်သာ နေပေးယုံဖြစ်ပါတယ်။ ယောက်ျားရဲ့ ထိပ်ဖျား၊ အထူးသဖြင့် ကွမ်းသီးခေါင်း အကားဆုံးနေရာကို ထိထိမိမိ မဖြစ်စေအောင်သာ ဆင်ခြင်ပါ။ ကျားအင်္ဂါရဲ့ အရင်းပိုင်းကို အသုံးချသင့်တယ်။ ကျားအင်္ဂါကို အဆုံးအထိ ထည့်ထားပေးရတာမို့ အမျိုးသမီးကလည်း သဘောကျမယ်။ ကျားအင်္ဂါရဲ့ အတံအပေါ်ပိုင်းနဲ့ မ-အစိတို့ ထိတိုက်မှုဖြစ်အောင် လုပ်တာပါ။ အဲလိုလုပ်တာက ကျားအင်္ဂါရဲ့ ထိပ်ဖျား အောက်ပိုင်းနေရာကို လွှတ်ထားရာကျမယ်။ ကျားမှာ အဲဒီနေရာက အာရုံခံ အများဆုံးဖြစ်လို့ စိတ်ထိန်းနိုင်စေတယ်။
တယောက်ယောက်က အဖြူဆင်းမနေရင်၊ ဆီးမအောင့်ရင်၊ အနာအဆာမရှိရင် ပုံမှန်သန့်ရှင်းရေး လုပ်တာနဲ့ လုံလောက်ပါတယ်။ ကျန်းမာ-ချမ်းသာကြပါစေ။
Posted by Dr. Tint Swe at 2:13 PM0comments
အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ (၁၇)
Posted by Dr. Tint Swe at 2:12 PM0comments
Q: ဒေါက်တာခင်ဗျား။ ကျွန်တော့် အမျိုးသမီးမှာ “နို့ပါးစပ်” ဖြစ်နေပါတယ်။ အဲဒါ ဘယ်လို ကုသနိုင်လဲ၊ ဘာကြောင့် ဖြစ်တာလဲဆိုတာ ရှင်းပြပေးစေလိုပါတယ်။ နို့သီးခေါင်းမှာ ပါးစပ်လိုလေး ဖြစ်နေပြီးတော့ ကလေးကို နို့တိုက်ဖို့ နို့မထွက်တာပါ။ နာကျင်တဲ့ ဝေဒနာတော့ မခံစားရပါဘူး။ သူတို့ တစ်မျိုးလုံးဖြစ်တာလို့တော့ ပြောပါတယ်။ ဖြစ်တာကတော့ မွေးရာပါပေါ့ ဆရာ။ အသက်ကတော့ ၂၃ ထဲမှာပါ။ ကလေးတော့ မရသေးပါဘူး။ ကလေးယူတဲ့ အချိန်ကျရင် ကလေးအတွက် အခက်အခဲဖြစ်မှာစိုးလို့ မေးကြည့်တာပါ။ ဖြေရှင်းနိုင်မယ့် နည်းလမ်းလေး သိချင်လို့ပါ။
ဗမာလိုရောဂါနာမည် ပေးတာတွေက တယောက်နဲ့တယောက်၊ တရပ်နဲ့တရပ် မတူကြလို့ အတော်ကြီး ဦးနှောက်စားတယ်။ အဖြစ်နိုင်ဆုံးကတော့ Inverted Nipple နို့သီးထိပ်ဖျား အထဲခွက်ဝင်နေတာဖြစ်မယ်။ (ဂျင်နရယ်) ရင်သားရောဂါဗေဒ စာရင်းထဲမှာ မသွင်းဘူး။ အထူးခွဲစိတ်ပညာထဲမှာသာ ပါတယ်။ မှန်ပါတယ် ကလေးကို နို့တိုက်ရတဲ့အခါ ပြဿနာ ပေါ်တယ်။ ဘယ်လောက်ဆိုးသလဲကို အဆင့်တွေ သတ်မှတ်ထားတယ်။
နို့သီးထိပ်ရဲ့တစိတ်တပိုင်းဝင်နေတာကို Dimpled ခေါ်တယ်။ အကုန်ဆိုရင် Inverted ခေါ်တယ်။ တချို့တ တဖက်ထဲ ဖြစ်တယ်။ နဲနဲသာဖြစ်သူက ကလေးကိုနို့တိုက်လို့ ပြဿနာမကြီးဘူး။ ကလေးက လမစေ့၊ အလေးချိန်နည်းလွန်းရင်တော့ ခက်မယ်။
အဆင့် (၁) လက်နဲ့ဆွဲထုတ်ပေးလို့ လွယ်တယ်။ နို့သီးဘေးက အညိုရောင်အ၀ိုင်း Areola ပေါ်မှာ ဖိထားပြီး၊ ထိပ်ဖျားကို ထုတ်ပေးရတယ်။ အဆင့် (၂) ဆွဲထုတ်လို့ရပြီး၊ ပြန်ဝင်သွားတဲ့အဆင့်။ မခွဲတဲ့နည်းကို စမ်းနိုင်တယ်။ မရရင် ခွဲစိတ်ရမယ်။ အဆင့် (၃) ဆွဲထုတ်လို့မရ။ ခွဲစိတ်ပြုပြင်ရမယ်။
အပြင်လူနာဖြစ်ဖြစ် အတွင်းလူနာဖြစ်ဖြစ် ကုပေးနိုင်တယ်။ ထုံဆေးနဲ့ခွဲတယ်။ နို့သီးထိပ်ရဲ့အခြေ၊ အရောင်ရင့် အ၀ိုင်း Nipple areola junction မှာ ဒါးနဲ့ခွဲပေးပြီး၊ နို့သီးဖျားကို ခွက်ဝင်နေအောင် ဆွဲထားတဲ့ (တစ်ရှူး) Tethered structure ကို Release ရှင်းပေးရတယ်။ ဘယ်လောက်အထိ ရှင်းရမလဲဆိုတာက ဖြစ်နေတဲ့အပေါ်မှာ မူတည်တယ်။ ခွဲစိတ်ပြီးနောက် ဆေးထည့်တာကို (စပါယ်ရှယ်) လုပ်ပေးရတယ်။ Plastic and white non-stick padding dressings ကို ခွဲစိတ်အပြီး၊ ၂၄ နာရီအတွင်းမှာ သုံးရတယ်။ နို့သီးထိပ်ပိုင်းကို ဖိနှိပ်ထားသလိုမျိုး မဖြစ်စေအောင် လုပ်ရတယ်။ Cotton gauze အလည်မှာ အပေါက် ဖေါက်ပေးတာမျိုး ပြောတာပါ။ ပြီးမှ Bra ခပ်နုနု သိပ်မချောင်တာမျိုး ၀တ်စေရတယ်။ Tape ကနေ အသားနု တက်လာမဲ့ အရေပြားနဲ့ (တစ်ရှူး)တွေကို မထိခိုက်စေရပါ။ Antibiotic အပြင် မနာအောင် Tylenol ပေးတယ်။
Hoffman Technique နည်းကတော့ လက်နဲ့ဘဲ ဆွဲထုတ်နည်းပါ။ အရောင်ရင့်အ၀ိုင်း နို့သီးထိပ်ဘေးကပ်လျက်နေရာမှာ လက်မနဲ့ လက်ညှိုးကိုထားပြီး၊ ခပ်တင်းတင်း အောက်ကို ဖိချ၊ တပြိင်နက်တည်းမှာ ဘက်နှစ်ချောင်းကို အဝေးကို ခွါပေးရတာပါ။ အနည်းဆုံး တနေ့ ၂-၅ ကြိမ်လုပ်ရတယ်။
Breast Pump နို့စုပ်စရာနဲ့စုပ်နည်း၊ ၀ယ်လို့လွယ်တယ်။ တောတွေမှာ ၀ယ်မတော့ သင်္ဘောရွက်အရိုးနဲ့ စုပ်ပေးကြတယ်။ Evert-it Nipple Enhancer ဆိုတာလည်း Silicone နဲ့လုပ်ထားတဲ့ Syringe ဆေးထိုးပိုက်လို ကရိယာဖြစ်တယ်။ နို့မတိုက်ခင် လုပ်ပေးရတယ်။ Nipple stimulation နို့သီးထိပ်ကို ဆွပေးတာပါ။ လက်မနဲ့ လက်ညှိုးသုံး၊ ၁-၂ မိနစ် ကိုင်ပြီး၊ Roll လုပ်ပါ။ ပြီးရင် ချက်ချင်း အေးနေတဲ့ (ရေခဲ)အ၀တ်နဲ့ ထိပေးပါ။ ရေခဲကို အကြာကြီးတော့ မသုံးပါနဲ့။ ထုံသွားမှာစိုးလို့။ ဟိုရုပ်ရှင်မျိုးရိုက်ရင် အဲဒီနေရာကို အသားပေဘို့ လုပ်တဲ့နည်းအတိုင်းပါဘဲ။
Medela SoftShells ဆိုတာက မခွဲစိတ်ဘဲ သုံးနိုင်တယ်လို့ ကြော်ညာတဲ့ ပစ္စည်းဖြစ်တယ်။ ခပ်ခုံခုံး ပလပ်စတစ်ခွံမှာ soft, flexible silicone နူးညံ့တဲ့ (စီလီကွန်) ပစ္စည်းနဲ့လုပ်တာ။ လေ၀င်ဘို့ အပေါက်လည်းပါတယ်။ နို့ရည် စုပ်နိုင်အောင် Highly absorbent foam ထည့်ထားတယ်။ နို့ရဲ့ အရောင်ရင့်ပိုင်း Areola ကို ဖိပေးထားတာမို့ နို့သီးထိပ်ကို စူထွက်လာ စေတယ်။ အပေါ်ကနေ ပုံမှန်ဝတ်ဆင်ထားရင် ပါနေမှန်း မသိရဘူး။
Avent Niplette ဆိုတာကလည်း Plastic thimble-like cup (ပလပ်စတစ်) ခွက်တခုပါ။ နို့ထိပ်ပိုင်းကို ပန်းပုထုသလို Mould လုပ်တာမျိုးပါဘဲ။ ထိပ်ဖျားစူထွက်စေအာင် ဘေးက အရောင်ရင့်ပိုင်းကို ဖိပေးစရာ ဖြစ်နေအောင်လုပ်တာပါ။ British Journal of Plastic Surgery, December 1993 မှာ ရေးထားတယ်။ တလ-ကိုးသီတင်း ၀တ်ထားရင် နို့သီး ထွက်နေမယ်လို့ ဆိုတယ်။ ကိုယ်ဝန်မဆောင်ခင်နဲ့ ကိုယ်ဝန် ၆ လအတွင်း သင့်တယ်လို့ ပြောတယ်။ မွေးရာပါ အတွက်တော့ အာမခံတာ မတွေ့ရဘူး။
ဘယ်ကလေးမဆို နို့တိုက်တာကို မွေးပြီး၊ အစောဆုံး (၂-၃ နာရီ အတွင်း) တိုက်သင့်တယ်။ အဖြူရောင်နို့ရည် မထွက်သေးလည်း တိုက်ပါ။ ရောဂါကို ခံနိုင်တဲ့ (အင်တီဘော်ဒီ) တွေပါတယ်။ နို့သိပ်တင်းလာမှာကို ကာကွယ်ရာလည်း ကျတယ်။ ကလေးကိုလည်း နို့တွေ သိပ်မများခင် အစို့သင်ရာလည်း ရောက်တယ်။ နို့တိုက်နေတုံး နို့အုံကို အရောင်ရင့် အ၀ိုင်း Areola အပြင်မှာ လက်မက အပေါ်၊ ကျန်လက်ချောင်းတွေက အောက်ထားပြီး၊ ဖိပေးရတယ်။ နို့တခါ တိုက်ပြီးတိုင်း နို့ထိပ်ကို ခြောက်နေပါစေ။ တချို့က Lansinoh brand lanolin ကို သုံးတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကတည်းက ရေချိုးတိုင်း ထိပ်ဝကို အ၀တ်သန့်နဲ့ နဲနဲကြမ်းကြမ်းလေး ပွတ်ပေးပြီး၊ နို့ထွက်ပြွန် (၇-၁၅) ခု ထိပ်မှာ ချွေးစတာတွေ ပိတ်မနေအောင် သန့်ပေးရမယ်။ ဗမာပြည်မှာ တချို့အရပ်တွေမှာ သားဦးမွေးရင် ၃ ယောက်မှာ ၁ ယောက် နို့နာဖြစ်တတ်တယ်။ ပြည်မတည်ခင် နို့တင်း-နာလာချိန်မှာ နို့ညစ်တာ၊ စုပ်ပေးတာ၊ အပူကပ်ပေးတာ လုပ်ရတယ်။ မရရင် (အင်တီဘိုင်အောတစ်) ဆေးပေးရတယ်။ နောက်ဆုံး ပြည်ရှိရင် ခွဲထုတ်ရတယ်။ တင်ပါးနဲ့ နို့က နေရာကျယ်တာမို့ Abscess အနာဖြစ်ရင် အကြီးကြီးတွေ။ ခွဲရင် အနာထဲ လက်ချောင်းတခု ၀င်နိုင်အောင်အထိ ကျယ်ရတာမျိုး။ သူများဆီမှာ ကလေးနို့တိုက် (စပါယ်ရှယ်လစ်) ဆိုတာရှိတယ်။ နို့ကို MRI ရိုက်တာလည်း အထူးပြုဘာသာရပ် ရှိသေးတယ်။
Posted by Dr. Tint Swe at 2:11 PM0comments
Posted by Dr. Tint Swe at 2:09 PM0comments
ချင်းတွင်းမြစ်ထဲကို အနောက်ဖက်ကနေ စီးဝင်တဲ့ “ယမား” နှစ်ခုရှိတယ်။ ယမားဆိုတာက နွေဆိုရင် ရေမရှိတဲ့ ချောင်းပါ။ လူကြီးသူမတွေက “ရေမရှိတဲ့ချောင်း၊ နှာခေါင်းနှစ် ဘာဖြစ်စေ-ညာဖြစ်စေ” ပြောလေ့ရှိတာပေါ့။ အဲ့့ မိုးများ ရွာလိုက်လို့ ကတော့ တခေါ်လောက်သာ ကျယ်တဲ့ယမားကို ကန့်လန့်ဖြတ် မကူးလေနဲ့။ ဘယ်လောက် သန်တဲ့နွားဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်လောက် မြန်တဲ့လူဖြစ်ဖြစ် မလွတ်ရေးချ မလွတ်။
ယမားချောင်းဘေး ရေကောင်းသလား မမေးနဲ့။ မြေအမျိုးအစားကလည်း တနယ်မြေမ လို့ခေါ်တယ်။ မဲပြီး၊ စေးနေတာမျိုး။ ပဲ-ပြောင်း-နှမ်း-၀ါ-ဂျုံ အကုန်စိုက်။ အထွက်လည်း ကောင်းတယ်။ မကောင်းတာကတော့ မိုးရွာပြီဆိုတာနဲ့ ကားမပြောနဲ့၊ လှည်းဘီးတောင် မလည်နိုင်တော့ဘူး။ တအောင့်နေ တခါ၊ လှည်းဘီးကရွံ့ကို ခြစ်ပြစ်ပါမှ ခရီးဆက်နိုင်မယ်။ ချောင်းစပ်-ချောင်းဘေးမှာ ကြက်သွန်၊ ခရမ်းချဉ်၊ လာစိုက်ကြတယ်။ သရက်ပင်၊ အုန်းပင်ဆိုတာ သားသမီး အမွေပေးရင် စာရင်းဝင်တယ်။ ချင်းတောင်မှာ ပျားအုံက မိန်းမတောင်းရင် တင်တောင်းလို့ ရသလိုပေါ့။ ယမားနှစ်ခုကြားမှာ ဟိုအရင်က မစိုက်ဘူးတဲ့ ကုလားပဲနဲ့ ဂျုံကို ပြောင်းစိုက်ကြတော့ ယင်းမာပင်ဂျုံ၊ ပုလဲဂျုံ၊ ဆားလင်ကြီးဂျုံ၊ ဈေးကောင်းရတယ်။
ဒီလိုဆိုလိုက်တော့ ဒီနယ်မှာ မွေးတဲ့ကလေး ကြီးရင် စိုက်ပျိုးရေးသမားဖြစ်မယ် ထင်နိုင်လောက်ပါရဲ့။ ဖြစ်တော့ မလို့ဘဲ။ ဆယ်တန်း အောင်တော့ အမှတ်ပေးစနစ်အသစ်နဲ့ ညားခဲ့တယ်။ နောက်လူတွေက သိကြမှာ မဟုတ်ဘူး။ နောက်လူတွေရဲ့ အသစ်-အဆန်းတွေကိုလည်း ရှေ့လူတွေ မချစ်-မနန်းကြဖူးဘူးသလိုပေါ့။ အဲဒီခေတ် ဆယ်တန်းအောင်ချိန်မှာ ဘယ်ပညာ၊ ဘယ်စာ ဆက်သင်မလဲဆိုတာ ဦးစားပေး သုံးခု ရွေးကြရတယ်။
၁၆ နှစ်သားဆိုတော့ ကြိုက်တာကို သိပ်မရွေးတတ်သေးဘူး မဟုတ်လား။ ဆေး၊ စက်မှု၊ ဆိုတာတွေက ထိပ်က။ တန်ရာနဲ့ ကြိုက်ရာ နှစ်ခုလုံး ရွေးလိုက်ရပါတယ်။ ကိုယ့်အမှတ်ကို ကိုယ်ကမှ အထင်မကြီးရင် ဘယ်သူလာကြီးမလဲ။ ဆေးကို တစ်။ အများဆုံးရတဲ့ ဘာသာ (မေဂျာ)ကို နှစ်။ တခုကျန်သေးတာ ဘာရွေးရမလဲ။ ကဲကွာ တတိယ ဦးစားပေး စိုက်ပျိုးရေး။ တောသူ-တောင်သား မျိုးရိုးဖြစ်လို့တော့ မဟုတ်ဘူး။ မန္တလေးမှာရှိတဲ့ ကျောင်းတွေကိုသာ ရွေးလိုက်ရလို့ပါ။
အလုပ်အကိုင်ရပြီး၊ အတော်ကြာမှ ကိုယ့်မြို့ကိုယ်နယ်ကို တာဝန်နဲ့ ပြန်လာရတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ၀ါတွေမစိုက်ကြတော့လို့ ၀ါစက်တွေ မလည်နိုင်တာ အတော်ကြာပြီတဲ့။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့အဖို့ အသုံးကြတာ သွားတွေ့ရတယ်။ ၀ါလှမ်းတဲ့ အုတ်ခုံကြီး။ ၈၇ ပေ x ၃၆ ပေ။ အနေတော်ဘဲ။ “ပုလဲ-အိုးပင်း” တင်းနစ် ကစားကွင်း လုပ်လိုက်ကြတယ်။
တရက်ကြတော့ တင်းနစ်ကစားရင်း ဘောလုံးကို ရိုက်ဖို့ ကြိုးစားတာ ကိုယ်အောက်ပိုင်းက မရွေ့နိုင်ဘဲ၊ အထက်ပိုင်းက ရှေ့တက်လိုက်မိတော့ ခါးနာပါလေရော့။ အတော့်ကို ခံရသဗျ။ ခါးနာတဲ့လူတွေက အများသား။ စာရင်းမှတ် လေ့လာသူများက လူ ငါးယောက်မှာ လေးယောက်က ဖြစ်ဖူးသတဲ့။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ နာတတ်တာ။ ယောက်ျား-မိန်းမ မရွေးဘူး။ အရွယ်က လူလတ်ပိုင်း ဖြစ်တတ်ကြတယ်။ ဒါပေတဲ့ များသောအားဖြင့် သာမန်ကာရှန်ကာနဲ့ ပျောက်ပါတယ်။ နာတာကို နားပြီး၊ အကိုက်ပျောက်ဆေးသောက် ပျောက်တာမျိုး၊ မဆိုးလှပါဘူး။ အဲလို ကံကောင်းသူ မဟုတ်ရင်တော့ နာမယ်၊ ကြာမယ်။ တခါဖြစ်ဖူးရင် ထပ်ထပ်လည်း ဖြစ်တတ်သေးတယ်။
အကိုက်အခဲ ပျောက်ဆေးကို ပဲလှော်လို၊ အိမ်တိုင်းမှာရှိ၊ လူတိုင်းလဲသိတယ်။ (ဘတ်စ်ပရို)၊ (အေပီစီ)၊ ပျင်းတာ လိုချင်ရင် (အနာဂျက်ဆင်)၊ အခုနောက်ပိုင်း၊ Ibuprofen, Combiflam, Diclofenic နာမည်တွေက အမျိုးမျိုး။ ဆေးနာမည် ဆိုတာ ကုပ္မဏီတွေက ပေးတဲ့နာမည် Brand name နဲ့ ဆေးနာမည် Generic name ဆိုတာ နှစ်မျိုးမှတ်ဘို့ လိုပါတယ်။ အကိုက်အခဲ ပျောက်ဆေးဆိုတာက ရေတွက်မကုန်အောင် နာမည်မျိုးစုံပေမဲ့၊ အမျိုးအစား သုံး-လေးမျိုး လောက်သာ ရှိတာပါ။ NSAID အုပ်စုလို့ နာမည်ပေးထားတာ။ (စတီရွိုက်) မပါတဲ့ အနာပျောက်ဆေး။ Steroid ဆိုတာ ဟော်မုန်းလိုဘဲ အာနိသင်ကပြင်း၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကလဲ မရှင်း၊ ပဲလှော်လို မစားဘဲ၊ ဒူးရင်းသီးလို တခါတလေမှ သေသေခြာခြာ၊ စားရတာမျိုး။
Pain killer လို့ အလွယ်ပြောပေမဲ့ သတ္တိက သုံးမျိုးတောင်ရှိတယ်။ နာတာလဲ ပျောက်၊ ဖျားတာလဲ ကျ။ ရောင်တာလဲ လျော့လို့ “သုံးလွန်းတင်ဆေး” ဖြစ်တယ်။ တကယ် ပဲလှော်လို စားနိုင်တာကတော့ (ပါရာစီတမော)။ ကျောင်းနေတုံးက ဒီဆေးကို အရေးမလုပ်ခဲ့ကြဘူး။ နောက်တော့ သွေးထွက်တတ်တဲ့ ရောဂါတွေ ခေတ်စားလာ။ ဗိုက်နာရောဂါတို့၊ သွေးလွန်-တုပ်ကွေးတို့၊ ဟိုက-ဒီက သွေးယိုတာတို့ များလာတော့ အကိုက်ပျောက်ဆေးတွေကို တလေးတစား၊ သတိထားရာကနေ တချိန်က လူသိမများခဲ့တဲ့ ကို(ပါရာ)က နေရာ ရလာတော့တယ်။
ဆိုးတဲ့ ခါးနာမျိုးက တော်တော့် အနာပျောက်ဆေးနဲ့ မရတော့ဘူး။ အပြင်းစားတွေ သုံးရတယ်။ ဘိန်းတမျိုးမျိုး ပါတဲ့ ဆေးမျိုးကို ပြောတာ။ နောက်ပြီး Muscular relaxant ကြွက်သားပြော့ဆေးလဲ ပေးရတတ်တယ်။ ခက်တာက ဆေးရှိန် ရှိနေတုံးမှာ အနာသက်သာမယ်။ “ခါးနာတို့မည်သည် ဆေးတခုတည်းနဲ့ မရပါ။”
ခါးနာသူများ “အအိပ်-အနေ-အထိုင်” ဤသုံးမျိုး ချက်ပိုင်ဘို့ လိုတယ်။ အိပ်ရင် ကြမ်းခင်း မာမာမှာ ခါးစန့်စန့်၊ ခေါင်းအုံး နိမ့်နိမ့် အိပ်ပါလေ။ သိပ်နာနေချိန် ခေါင်းအုံးမသုံးဘဲ လေ့ကျင်းခန်းသဘောမျိုး လှဲနေပါ။ ဆင်းရဲသားကြိုက်ပါ။ ပက်လက် ကုလားထိုင်မှာ မထိုင်လေနဲ့။ မွေ့ယာ မသုံးနဲ့၊ (ဒရင်း-ဘက်) မ၀ယ်နဲ့၊ Hammocks ဆိုတဲ့ ကြိုးတို့၊ အ၀တ်တို့နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ပုခက်အိပ်ယာနဲ့ စတိုင် မထုတ်ပါနဲ့။
ထိုင်ရင် ကျောမှီပါရမယ်။ ပေါင်က အခင်းမှာ ကပ်နေသလို ကျောက နောက်မှီမှာ ကပ်နေပါစေ။ ဆောင့်ကြောင့် မထိုင်ပါနဲ့။ လက်တ၀ါးလောက်သာ မြင့်တဲ့ ဖင်ထိုင်ခုံမှာ ထမင်းချက်ရင်း၊ မီးလှုံရင်း။ အတင်းပြောရင်း၊ သန်းရှာရင်း၊ မထိုင်ပါနဲ့။ တီဗွီကို လှဲရင်းကြည့်မယ် ဆိုပါတော့၊ ဆက်တီ-ကူရှင်ပေါ်မှာ ငါးထပ်သားပြားကို ခင်းထားမှ ကောင်းမယ်။ သိကြားမင်းရဲ့ ကဗ္ဗလာမျိုးနဲ့ မရဘူး။
မနက်လင်းလို့ မျက်နှာသစ်ရင် ပြဿနာတက်ပြီ။ ခါးကို ကုန်းလိုက်လို့ကတော့ ပိုဆိုးမယ်။ မကုန်းရင်လည်း ဗိုက်ကို ရေစိုပြီ။ စိုပါစေ။ လက်ဆေး၊ ပန်းကန်ဆေး၊ အ၀တ်လျှော်၊ ဘာမဆို ခါးကို ဆန့်ပြီးမှ လုပ်ပါ။ ကွန်ပြူတာမှာ ထိုင်တဲ့အခါ လက်ကောက်ဝတ်ကိုဘဲ သတိပေးနေတာနဲ့ မလုံလောက်ဘူး။ တံခါး၊ ဘီရို၊ စားပွဲ၊ လက်ဆေးခွက်တွေ အားလုံးဟာ ကိုယ့်အရပ်နဲ့ ကိုက်နေဘို့ လိုတယ်။ ဘယ်လောက်ဘဲ ပြောင်လက် ချောမွေ့နေအောင် လုပ်ထားပါစေ၊ ရွှေကွပ် ထားအုံးတော့ အနိမ့်အမြင့် မကိုက်တဲ့ အသုံးအဆောင်ဟာ ရန်သူဘဲ။
ခါးနာတာကို ခါးမှာ အပူကပ်ရင် သက်သာနိုင်တယ်။ ပရုပ်-ပလာစတာ၊ ငရုပ်သီး-ပလာစတာ ဆိုတာမျိုး၊ (အင်ဖရာ-ရက်) ဆိုတဲ့ အနီအောက်ရောင်ခြည်နဲ့ မီးနီကင်တာလဲ အထောက်အကူရပါတယ်။ Physiotherapy (ဖီဇီယို) ခေါ်တဲ့ ဖယောင်းကပ်ပေးတာတို့၊ အကူပစ္စည်းတွေနဲ့ လေ့ကျင်ခန်း လုပ်တာတို့လဲ လုပ်နိုင်တယ်။ သိဘို့က အခုဖြစ်နေတာကိုသာ သက်သာစေတာပါ။ ခါးနာစေအောင် လုပ်မိပြန်ရင် ပြန်ဖြစ်မယ်။ ကံဆိုးသူများ ခါးနာလို့ အာရုံကြောသွားထိရင် ခွဲစိတ်ကုသဘို့ လိုမယ်။ ခေတ်စားလာတဲ့ ကုနည်းတခုက ခါးမှာ အင်္ဂတေလို အစွမ်းရှိတဲ့ ဆေးထိုးပေးတာပါ။
စားရင်း သောက်ရင်းတော့ ဒီစာ ဆက်မဖတ်နဲ့နော်၊ အိမ်သာတက်တာ စပါယ်ရှယ်မှ ဖြစ်တာကို ရေးချင်လို့ပါ။ Squat toilet ဆောင့်ကြောင့်ထိုင် အိမ်သာနဲ့ ရှင်ခန်းဖြတ်ပေတော့။ ဒီနေရာမှာ ဗိုလ်ဆန်ဘို့ လိုပါတယ်။ ဒူးနဲ့ခါးကို ၉၀ ဒီဂရီ ထားထိုင်လို့ ရတဲ့ English type အိမ်သာ အမျိုးအစားနဲ့သာ ခါးနာသူများ ထိုက်တန်တယ်။ ဆင်းရဲသားတွေ ကံမကောင်းဘူး။ အစားမတော် တလုပ်၊ အသွားမတော် တလှမ်း။ ကစားမတော်တော့ တလှမ်းတောင် မလှမ်းရဘူး ဖြစ်တတ်တယ်။ စားသတိ၊ သွားသတိ၊ ကစားသတိ ရှိနိုင်ကြပါစေ။
ချင်းတွင်းသားများ (ဘလော့ခ်)မှာ ဒီစာကို စရေးရာကနေ ဒီစာမျိုးတွေ ရေးဖြစ်တယ်။
Posted by Dr. Tint Swe at 2:08 PM0comments
Posted by Dr. Tint Swe at 2:07 PM0comments
To htetlinaung@gmail.com လေးဘက်နာကို ဘယ်လိုနေရမလဲ စာထဲမှာပါတယ်။ နှလုံးရောဂါအတွက် စာတပုဒ် ရေးမှ ဖြစ်မယ်။ အမြန်-အတို ပြောရရင် လူမော-စိတ်မော အမောမခံရပါ။ နှလုံးအတွက်ဆေး အမြဲလိုလို သောက်ဘို့ လိုတယ်။ အဆို့ရှင် အခြေအနေကို နှလုံးအထူးကုဆရာဝန်ကနေ ခွဲဘို့ပြောချင် ပြောလာနိုင်တယ်။ အဆို့ရှင် ကောင်းနေသးရင် နှလုံးခုန်နှုန်း မများအောင် ဂရုစိုက်နေပါ။
To Soe Sandar Nyi မိုးနဲနဲအုံ့တာနဲ့ လက်ဆစ် ခြေဆစ်တွေ၊ ဒူးတွေ၊ နောက်ကျောရိုးတွေ ကိုက်တာကို Arthritis, Rheumatism ထဲမှာ ပါတယ်။ ရေးခဲ့သလို တချို့ ရာသီဥတုနဲ့ ဆိုင်တယ်။ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးသာ သောက်ရလိမ့်မယ်။ အစာနဲ့နီးပါစေ။ သိပ်ဆိုးတဲ့သူတွေကို Prednisolone (ကော်တီဇုံး)ဆေးမျိုး ပေးတတ်တယ်။ အတော် သတိကြီးကြီးနဲ့ပေးတယ်။ ဆေးကို အစမှာ များများ ပေးရာကနေ သက်သာချိန်မှာ လျှော့လျှော့ ပေးသွားရတာ။
Posted by Dr. Tint Swe at 2:06 PM0comments
“လေးဘက်နာ” ကို ဖတ်ရာကနေ မေးလာတာတွေရှိလို့ အဆစ်နာကို ထပ်ဖြည့်လိုက်ပါတယ်။ အဆစ်နာ အမျိုးပေါင်း ၂၀၀ ရှိတယ်။ အကြီး-အငယ်၊ အရွယ်မရွေး၊ ကျား-မ မရွေး ဖြစ်တယ်။ တကိုယ်လုံးအနှံ့ ဖြစ်တယ်။ Osteoarthritis အဆစ်ကို အသုံးချတာ များရာကနေ ကြာတော့ ပွန်းပဲ့ ဟောင်းနွမ်းရာကနေဖြစ်တာမျိုး။ Rhumatoid arthritis ခုခံအားစနစ်ကြောင့် ဖြစ်တယ်။ Juvenile arthritis ကလေးတွေမှာဖြစ်တာ ဆိုပြီး သုံးမျိုးခွဲနိုင်တယ်။
(၃) Steroids (စတီရွိုက်)ဆေး။ ကိုယ်ထဲကနေ အလိုလိုထုတ်ပေးနေတဲ့ cortisone သဘာဝဟော်မုန်းဖြစ်ပြီး၊ အရောင်ကျစေတယ်။ သတိထားရမှာက ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်တယ်။ တခြားဆေးနဲ့မတိုးမှ သုံးတာကောင်းတယ်။
ဆေး အချိုးအဆ၊ တခါသောက် ဘယ်လောက်၊ ဘယ်လောက်ကြာကြာ၊ အစာနဲ့နီး-ဝေး၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး၊ ဆိုတာတွေ သိထားပါ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေက တယောက်နဲ့တယောက်၊ ဆေးတမျိုးနဲ့တမျိုး မတူဘူး။
Posted by Dr. Tint Swe at 2:05 PM0comments
Q: ဆေးစားရင်းနဲ့ ကိုယ်ဝန်ရခဲ့ရင် ကလေးကို ထိခိုက်နိုင်ပါသလား သိပါရစေရှင်။ ကိုယ်ဝန်တားဆေးကို ပြောတာပါဆရာ။ Family Planning Pills3cycles Microgynon Fe အဲဒီဆေးတွေက လင်မယားတွေ အတူမနေခင် ကတည်းက စားရတာ ပါလား။ အတူနေမှစားပြီး ကိုယ်ဝန်ရခဲ့ရင် ကလေးနဲ့ လူကြီး ထိခိုက်မှာစိုးလို့ပါ။
A: ပဋိသန္ဓေတားဆေးတွေထဲမှာ Estrogen နဲ့ Progestogen ဟော်မုန်းနှစ်မျိုး ပူးတွဲပါတာကို COC လို့ ခေါ်တယ်။ Microgynon ဆေးက Progestogen-only pill (POP) ခေါ်တဲ့ ဟော်မုန်းတမျိုးတည်းပါ စားဆေးဖြစ်တယ်။ အမျိုးမျိုး ရှိတယ်။ ဒီဆေးကြောင့် သားအိမ်အဝရှိနေတဲ့ ချွဲကြိတဲ့ အရည်ကို ပြစ်စေးလာစေပြီး၊ ကျားသုတ်ပိုးကို သားအိမ်ထဲ မဝင်စေအောင် တားထားဆီးတယ်။ နောက်ပြီး သားအိမ် အတွင်းသား နံရံကို ပါးလွှာစေပြီး၊ သန္ခေဥတွယ်ကပ်ခြင်းကိုလည်း တားဆီးပေးတယ်။ ၉၉% ထိရောက်တယ်။
လစဉ်ရာသီ စလာတဲ့နေ့က ၅ ရက်မြောက်နေ့ကစ ဆေးသုံးရတယ်။ နေ့စဉ် ဆေး ၁ ပြားကို အချိန်မှန်မှန် ဆေးကပ် ကုန်တဲ့အထိ သောက်ရတယ်။ ဆေးကပ်ကုန်တာနဲ့ နောက်ထပ်တကပ် ဆက်သောက်ပါ။ ကလေးနို့တိုက်နေစဉ်လည်း သောက်နိုင်တယ်။ နို့ထွက်မနည်းစေပါ။ အသက်ကြီးရင်လည်း သောက်နိုင်တယ်။ ရာသီမလာမီဖြစ်တဲ့ လက္ခဏာတွေ ကိုလည်း သက်သာစေတယ်။
ရင်သားတင်းခြင်း၊ အရေပြားပေါ် အစက်အပျောက် ပေါ်ခြင်းတို့ဖြစ်စေတတ်တယ်။ ရာသီနည်းခြင်း၊ မလာခြင်း၊ ရှားရှားပါးပါး မျိုးဥအိမ် အကြိတ်အလုံးပေါ်ခြင်း ဖြစ်တတ်တယ်။ အခု ဒါမှမဟုတ် အရင်က ရင်သားကင်ဆာရှိနေရင်၊ ကိုယ်ဝန်ရှိနေရင်၊ အသဲနှင့် သဲခြေအိပ်ရောဂါရှိနေရင်၊ မျိုးဥအိမ် အကြိတ် အလုံးရှိဘူးရင်၊ (မိုင်ဂရင်း)အမူးရောဂါရှိရင် မသုံးသင့်ပါ။
ဆေးသောက်ပါလျက် ကိုယ်ဝန်ရှိတာ အတော်ကြီးနည်းတယ်။ ကိုယ်ဝန်ရှိပြီးမှ ဆေးသောက်လို့လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒီဆေးသောက်တာ ရက်မကျော်ရပါ။ အစပိုင်းလတွေမှာ ကြားရက် သွေးနဲနဲဆင်းတာ ဖြစ်တတ်ပေမဲ့ နောက်ဆို မဖြစ်တော့ဘူး။ ဆေးထဲမှာပါတဲ့ ဟော်မုန်းအနည်းအများက တိုင်းပြည်တခုနဲ့တခုမှာ မတူကြပါ။
ဆေးက ကိုယ်ဝန်ဖြစ်လာမှာကိုသာ တားဆီးတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဖြစ်လာပြီးတာကို သက်ရောက်မှာ မဟုတ်ပါ။ ကိုယ်ဝန် ဆောင်နေတုံးမှာ ကိုယ်ကထုတ်ပေးနေတဲ့ ဟော်မုန်းတွေမှာ ဒါမျိုးလည်းပါတယ်။ ဒီဆေးသောက်မိရင် အချိုးအဆ ပြောင်းသွားစေနိုင်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကိုယ်ဝန်မရှိမှ အသောက်ခိုင်းတာ။ မတော်တဆ သောက်ခဲ့ရင် ကိုယ်ဝန်-မိခင်ကို ထိခိုက်တာအတွက် သုတေသန လုပ်ထားတာ မတွေ့သေးပါ။
Posted by Dr. Tint Swe at 2:04 PM 1 comments
Posted by Dr. Tint Swe at 2:04 PM0comments
Posted by Dr. Tint Swe at 2:03 PM0comments
Posted by Dr. Tint Swe at 2:02 PM0comments